10/15/13 ~ Myanmar Forward
ထရိတ်ဒါး ဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသူ ဘန်ကောက်ဆေးရုံ ပြောင်းရွှေ့
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်ကြီးများဟုိုတယ်( Traders) တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကုိုတွေ့ရ စဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် (ထရိတ်ဒါးဟိုတယ်) တွင် ယမန်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံက ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသူ Mrs.Piaiorstသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကု သမှုခံနေရာမှ စင်းလုံးငှား လေယာဉ် ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဘန်ကောက်ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Mrs.Piaiorst နှင့် မိသားစုဝင်များသည် ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်၊ ၉ လွှာ၊ အခန်း အမှတ် ၉၂၁ တွင် တည်းခိုနေခဲ့ ကြရာမှ Mrs.Piaiorst သည် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံတွင် ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့ပြီး ရေချိုးခန်းရှိ ဘေစင် အောက်မှ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့် Mrs.Piaiorst ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း၊ Mrs.Piaiorst ၏ ခင်ပွန်း နှင့် သား ၂ ဦးမှာ တစုံတရာ ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် Mrs.Piaiorstကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသ ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် ၎င်းတို့အစီအစဉ်ဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့၊ ဘန်ကောက်ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
“ ဒဏ်ရာရတဲ့ အမျိုးသမီးရော သူ့မိသားစုကတော့ အေးဆေးပါ။ မနေ့က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ အရင် ကုသပေးပါတယ်။ ဘာမှ စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ မှန် အစအနတွေကြောင့် ဒဏ်ရာရ သွားတာ” ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ကဧရာဝတီ သို့ ပြော သည်။
ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သော Mrs.Piaiorstသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသပေးမှုကို ကျေနပ်မှု ရှိပြီး ကုန်သည်ကြီးများ
ဟိုတယ်နှင့် ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက် စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် Mrs.Piaiorst ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီက စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ဖြင့် ဘန်ကောက် ဆေးရုံသို့ လာရောက်ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးအောင်ဇော်ဝင်းက ဆိုသည်။
လတ်တလော လုံခြုံရေးအခြေအနေများအရ ဟိုတယ်များအနေဖြင့် ခရီးသွားဧည်သည့်များ၏ လုံခြုံရေးကို အထူး ဂရုပြု စေလိုကြောင်း၊ ခရီးသွားရာသီတွင် ၀န်ဆောင်မှု အပြည့်အ၀ စေတနာဖြင့် ပေးစေလိုကြောင်း ၎င်းက တိုက်တွန်း ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ လုံခြုံရေး အသိရှိဖို့ ပြောချင်တယ်။ ပြီးတော့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့လည်း check-in ၊ check-out ကိုပဲ မကြည့်ဘဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ပေးဖို့ ပြောလိုပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့် ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဒုလလမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းထောင့် City Star ကွန်ပျူတာဆိုင်ရှေ့တွင် ဗုံးလန့်မှု တရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် လမ်းမတော်မြို့နယ် စံပြကားမှတ်တိုင်အနီးတွင် ဗုံးလန့်မှု တရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများသည် ပြည်သူလူထု အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေရန် နှင့် ကြောက်ရွံ့စေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် ဗုံးကွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သူများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်း လျက်ရှိ သည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း မြန်မာအသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ် ဗုံးကွဲမှု သံသယရှိသူ ၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်ကြီးများဟုိုတယ် (Traders) တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကုိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိခံရသူ ၁ ဦးကို ဖမ်းဆီး ရမိထားပြီး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဖြူးမြို့တွင် ဗုံးတွေ့ရှိမှု၊ တောင်ငူမြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယ ရှိခံရ သူ ၁ ဦးကိုမူ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက် ခြေရာခံနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်ုသည်ကြီးများဟိုတယ်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဗုံးခွဲမှုဖြစ်စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သံသယရှိခံရသူ စောမြင့်လွင် ဆိုသူကို ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်၊ ဗုံးတွေ့ရှိမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး သံသယရှိသူ စောထွန်းထွန်း ဆိုသူ ကို ခြေရာခံမိထားပြီး ဖမ်းဆီး နိုင်ရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မန္တလေး နှင့် စစ်ကိုင်း ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များ နှင့် ဆက်စပ်သော သံသယ ရှိသူများကို ဆက်လက်စုံစမ်း ဖော်ထုတ်လျက် ရှိကြောင်း အစိုးရ၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ သံသယရှိခံရသူ စောမြင့်လွင်ကို မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့ပြင်တွင် ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး စောမြင့်လွင်သည် အဖမ်းမခံဘဲ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကားများဖြင့် လိုက်လံ ဖမ်းဆီး ခဲ့ရကြောင်း ဘီးလင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် သန်းဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
“ရန်ကုန်က ရဲမှူးသိန်းလွင်နဲ့ အဖွဲ့က မနက် အစောကြီးကတည်းက ဒီကို ရောက်လာပြီး စောင့်နေတာ။ သတင်းအရ ဓာတ်ပုံ တွေလည်း ပါလာတော့ ကျနော်တို့က ၀ိုင်းကူပေးတာ။ စောမြင့်လွင်က ဆိုင်ကယ် ရပ်မပေးတော့ ကားနဲ့ အတင်း လိုက်ပြီး ဖမ်းလိုက်ရတယ်´´ဟု ဒုရဲအုပ် သန်းဦးက ဆိုသည်။
စောမြင့်လွင်သည် အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ရှိပြီး ဖာပွန်မြို့နယ် သူမွဲထကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ် ကြောင်း ၊ စောမြင့်လွင် ကို အလုံမြို့နယ် Western Park Ruby စားသောက်ဆိုင်တွင် မိုင်းတွေ့ရှိစဉ်ကတည်းက စတင် ခြေရာခံမိခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မှတ်ပုံတင် တက္ကစီကားပေါ်တွင် မေ့ကျန်ခဲ့ရာမှ နေရပ်လိပ်စာကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ကုန်သည်ကြီး များဟိုတယ် CCTV မှတ်တမ်းများတွင် ရရှိထားသော သံသယရှိခံရသူ၏ ပုံစံ သည် စောမြင့်လွင်၏ ပုံသဏ္ဍန် နှင့် ဆင်တူကြောင်း၊ စောမြင့်လွင်ကို ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးသိန်းလွင်နှင့် အဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ ခေါ် ဆောင် ပြီး စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဟု သိရှိရကြောင်း သထုံခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
တောင်ငူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးဇော်မင်းက“ တောင်ငူ ဗုံးကွဲမှု၊ ဖြူးမြို့မှာ ဗုံးတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ သံသယရှိခံရတဲ့ စောထွန်းထွန်းကို ဖမ်းဆီးရဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်´´ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ အထိ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၆ ကြိမ်၊ ဗုံးတွေ့ရှိရမှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး လူ ၂ ဦးသေဆုံးကာ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရက နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်ပြား စေရန် ရည်ရွယ်သော ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းအစီအစဉ် သုံးရပ်မှာ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်းရှိ ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးငယ်များ အတွက် ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း အစီအစဉ် (Goal)၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ကိုင်သူများအတွက် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ (Education for Entrepreneurs) နှင့် အမြင်အာရုံ အားနည်း ချို့ယွင်းမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်မည့် စီမံချက် (Seeing is Believing) တို့ ဖြစ်ကြောင်း Standard Chartered Bank ထံမှ သိရသည်။
ယင်းအစီအစဉ် သုံးခုတွင် Goal အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ်အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းတွင် စတင်အကောင် အထည် ဖော်မည် ဖြစ်ပြီး HIV/AIDS အသိပညာပေး ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း Standard Chartered Bank က ဖော်ပြထားသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် အဆိုပါဘဏ်သည် နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားပြီးနောက်တွင် ဥရောပနိုင်ငံများအနက်မှ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်စားလှယ် ရုံးခွဲဖွင့်သော ဘဏ်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်။
ယင်းဘဏ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်တာ ၀င်ရှာရမှ ကျောက်အရိုင်းတုံး ပိသာ ၇၀၀ ကျော်တွေ့
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under မှုခင်း | No comments
မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာ စံမြို့နယ် ၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ ယာဉ်ပျံရပ် ၅၉*၆ဝကြား၊ ၃၀*၃၂ကြားရှိ ရတနာတိုင်းပြည်လုံးချင်း အိမ်ရာ နေအိမ်သို့ မူးယစ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှာဖွေရာမှ ကျောက်အ ရိုင်းတုံး၉၀ အလေးချိန် ၇၂ရပိဿာ ၆ဝကျပ်သားတွေ့ရှိ သဖြင့် အိမ်ရှင် ဦး... အား (ပ)၄၃၅/၂၀၁၃၊ ကျောက် မျက် ဥပဒေ ပုဒ်မ၄၂(က) ဖြင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အ မှတ်(၃)နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ အောက် တိုဘာ ၁၁ရက်တွင် အမှုဖွင့်အ ရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ဦး... မှာ အမှတ်(၉) မြို့မရဲစခန်းမှ မယ(ပ)၁၉/၂၀၁၃၊ မူးစိတ်ပုဒ်မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁ဖြင့် အရေးယူ ခံထားရပြီး မူးယစ်ဆေး မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၁ဝရက်က မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး မှုခင်း အကူဌာနစိတ်မှ ရဲအုပ် ရဲမြင့်နှင့်အဖွဲ့က သက်သေများဖြစ် သော ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ကဉ္စနမဟီ ရပ်ကွက် အကွက်မှူး ဦးမြင့်ထွန်း၊ အရှေ့ရပ်ကွက်အ ကွက်မှူး ဦးမင်းမင်း၊ အောင်မြေ သာစံမြို့နယ် အမရဋ္ဌာနေအရှေ့ ရပ်ကွက် အကွက်မှူး ဦးကိုကိုနိုင်၊ ကျောက်ကျွမ်းကျင်သူ ဦးခင်မောင် ဦးတို့နှင့်အတူ ဦး ....၏နေ အိမ်သို့ သွားရောက်ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ရဲမှူး(ရေး/ထောက်) ၏ မူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ရှာဖွေ ခွင့် ဝရမ်းအမှတ် ၆/၂၀၁၃ဖြင့် ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ဦး...၏ နေအိမ်အောက် စတိုခန်းအတွင်းမှ တရားမဝင် ခရမ်းရောင်ကျောက် အရိုင်းတုံး ၇၄တုံး၊ အလေးချိန် ၅၉ပိဿာ၎ဝကျပ်သားခန့်၊ တရား မဝင် အနီရောင်ကျောက် အရိုင်းတုံး ၁၅တုံး၊ အလေးချိန်ရှစ်ပိဿာ နှင့် အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ စားပွဲပေါ်မှ အပြာရောင်ကျောက်ရိုင်းတုံး တစ်တုံး အလေးချိန် ၃၅ကျပ်သား စုစုပေါင်း ရောင်စုံကျောက်အရိုင်း တုံး၉၀ အလေးချိန်ရ၂ရပိဿာ ၆၀ ကျပ်သား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အနုပညာသမား ရဲ့ ဘဝကို ပရိသတ်က ပိုင်တာပါ ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under အနုပညာ | No comments
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရဲ့ မိခင်ကြီး ဒေါ်ထွေးရီ (ပဲခူး) ၉၄နှစ် ဟာ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ နေ့လယ်(၁၂) နာရီက ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)က Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲ ကြီးမှာ စတိတ် ဒါရိုက်တာ အနေနဲ့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရ မှာ ဖြစ်တာကြောင့် မနက်ပိုင်း မှာ မိခင်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးမှ အမျိုးသားက ဇာတ်ရုံကို သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော် တို့က ၁ဝနာရီခွဲမှာ အကုန်လုံး ချိန်ထားကြတော့ ၁ဝနာရီ မှာ အမေ က နိုးနေတယ်။ အမေ နေကောင်းလား ဆိုတော့အေးတဲ့။ ဘာစားပြီးပြီလဲ။ အခုမှ နိုးတာလား ဆိုတော့ အခု မှနိုးတာတဲ့။ အမေ ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာမှ မလုပ်ချင် ပါဘူး။ သားရယ်တဲ့။ သမီး ကိုလည်း ဘွားဘွားကို ဂရုစိုက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ အမေသား အလုပ်သွားဦး မယ်နော်လို့၊ အမေက ဘာမှ ပြန် မပြောဘူး။ အမေကြားလား၊ သား အလုပ် သွားတော့မယ်လို့၊ အေးအေး တဲ့။ သူမသွားစေချင်ဘူး နဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ၁ဝနာရီခွဲ ချိန်း ထားတော့ သွားရတယ်။ အိမ်ဖော် ကောင်မလေးက ထမင်းစား မလားဆို တော့ မစားချင်ဘူးတဲ့။ သမီးက ဆေး တိုက်ဖို့ ဆေးသွားယူ တုန်းပဲ ရှိသေး တယ်။ အသက် မရှိတော့ဘူး။ ညင်ညင် သာသာလေးပဲ။ ဘာမှ ဝေဒနာ မခံစား လိုက်ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို အကြောင်း မကြားကြဘူး။ ဆာမိ ရှိတော့ ဆာမိ ကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။ နင့် ဆရာရဲ့ အမေတော့ ဆုံးသွားပြီ။ သူ့ကို အသိမပေး ထားဘူး လို့ ပြော တယ်။ ကျွန်တော်က ဘာမှ မသိဘူး။ လုပ်စရာ ရှိတာတွေ ကို လုပ်နေတယ်။ ညနေ ၄နာရီကျမှ ဖုန်းဝင်လာ တယ်။ နာရေးက ဘယ်မှာလဲတဲ့။ ဘာ နာရေးလဲလို့။ မင်းအမေ ဆုံးတာ မင်းမသိဘူးလားတဲ့။ ဘာတွေ လာပြောနေတာ လဲ ဆိုပြီး စိတ်တိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်လာတယ်။ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အမေ ဘာဖြစ်လဲ ပြောစမ်းဆိုမှ အမေဆုံးပြီတဲ့။ ၅နာရီ ဖြစ်နေတော့ သွားလို့ မရတော့ဘူး။ Body ကို ၆နာရီ မတိုင်ခင် လာသယ်မှာတဲ့။ ငါ့အမေကို မမီတော့ ဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ စိတ်တုံးတုံး ချလိုက်တယ်။ ငါသွားရင်လည်း ဒီပွဲလည်း မမီဘူး။ ကားလမ်းပိတ်တာနဲ့ သွားရင်လည်း ဒုက္ခရောက်မယ်။ ဒါကိုပဲ အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်တော့ မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် တင်လိုက်တယ်။ တင်ရင်းနဲ့ ချောင် လေးက အမှောင်ထဲမှာ သွားငိုလိုက် တယ်။ ပြီးတော့ လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ် တယ်။ အားလုံး ပွဲပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်သွားတယ်။ အိမ်ကိုလည်း မပြန် ချင်ဘူး။ အိမ်မှာ အမေ မရှိဘူးဆိုတာ သိနေတော့ မပြန်ချင်ဘူး။ မပြန်လို့ မဖြစ်ပါဘူး ဆိုပြီး အိမ် ကိုပြန် ခဲ့တယ်။ ဟိုးတုန်း ကတည်းက အမေက ကျွန်တော် ပြန်လာမှ အိပ်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ အနုပညာသမားက ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်မပိုင်ဘဲ ပရိသတ်တွေက ပိုင်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)က ပြောပါတယ်။
၂နှစ်ကြာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှု နားထားရာက ပြန်လည်ပြီး ဇာတ်ကားတွေရိုက်လာတဲ့မယ်လိုဒီ
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေရပ်နားခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ ဟာ အောက်တိုဘာ ၇ရက်နေ့ကဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူး နေပြီဖြစ်ပါ တယ်။ပထမဆုံး ဇာတ်ကား ကို တော့ ‘ကောင်းကင်ထက်က မြစ်တစ်စင်း’ ဆိုတဲ့ ဇာတ် ကားကို ထိုက်စံမော့စ်၊ ဒါရိုက်တာဗေဒါတို့နဲ့ ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီက ဇာတ် ကားရိုက်ကူးမှုတွေ နှစ်နှစ်တာ ကာလ မလုပ်ဖြစ် ပေမယ့် ဗီစီဒီတွေတော့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်တော့ဘူးဆိုရာက ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖြစ်ပုံကို “ဇာတ်ကားက ပြန်ရိုက်ဖို့ ပထမဆုံး လက်ခံ ထားတာက ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းအောင် ဇော်၊ နောင်နောင်တို့ နဲ့ ရိုက်ဖို့ပါ။ သူတို့က လည်း ပြန်ရိုက်စေချင် တယ်။ မျိုးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်က လည်း ပြန် ရိုက်စေချင်တဲ့ အတွက် ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဒီကားတွေက အရင်ရိုက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် ရိုက်ဖြစ်သွားတာ။ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေ နားတာက ကြားထဲမှာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကြားထဲမှာ မသဲနုဝါ၊ သန္တာဗိုတို့ အခွေကိုမေတ္တာ လက်ဆောင် အနေနဲ့ ဗီစီဒီရိုက်ပေးခဲ့တယ်။ အခုဟီရူးစကား ကြော်ငြာစရိုက်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားတွေ ပြန်ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ အခုဇာတ်ကားပြန်ရိုက်တော့ အကုန်လုံး နွေးနွေးထွေးထွေး ပါပဲ။ အသက်အရွယ် ရလာလို့လားတော့ မသိဘူး။
သိပ်စိတ်မလှုပ်ရှားတတ်တော့ဘူး။ လူဆိုတာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ပေ မယ့် အရင်လိုမဟုတ်ဘူး။ အရင်တုန်းက ငယ်တဲ့တစ်လျှောက်မှာ စိတ်လှုပ် ရှားရင် အမှားပါ တယ်။ အခုက ပိုဆင်ခြင်နိုင်တယ်။ အမှားလည်း နည်းနည်း နည်းသွားတာပေါ့။ အခုက နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဦးနှောက်ရော၊ စိတ်၊ ခန္ဓာ ကိုယ်ရော အနားရသွားတယ်။ စဉ်းစားချိန်၊ ပြင်ဆင်ချိန်ရတယ်။ တောက် လျှောက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခါကျတော့ လူက weak ဖြစ်လာတာပေါ့။ အခု ကျတော့ နားနေရာက ပြန်လုပ်တော့ အားပြည့်နေ တာပေါ့။ အခု မပင်ပန်းဘူး။ သက်သောင့်သက်သာလည်းရှိတယ်” လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဇာတ်ကားရိုက်တွေကို လတ်တလောမှာတော့ ငါးကားလက်ခံထား တာဖြစ်ပြီး လက်ခံတဲ့အခါ အဓိက ဇာတ်ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြော ပြပါတယ်။ “နားတဲ့အချိန် တုန်းက ဇာတ်ကားတွေကို တီဗီက ကြုံကြိုက် တဲ့ အခါကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သူကို စွဲလမ်းရင် သူ့အိုက်တင်ပဲ ဖြစ် နေမှာပေါ့။ ကိုယ်ရှိတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်နိုင် သလောက်လေးကိုပဲ ရိုးရိုး သားသားလုပ်ရမှာပေါ့။ ကော်ပီကူးတာ မကောင်းဘူးလေ။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်ကားကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား ဇာတ်ရုပ် မတူ ဘူး လေ။ အဓိကက ဇာတ်ကိုပဲ ကြည့်တယ်။ ဇာတ်ကိုလည်း ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းတွေက မလိုက်တော့ အဲဒီလို ဇာတ်တွေလည်း လာမပြပါဘူး။ ဇာတ်ကားတွေကိုတော့ အခုလက်ခံထားတဲ့အထိတော့ ရိုက်ဖြစ် သွားမှာပါ။ အဆုံး အထိတော့ မပြောရဲသေးပါဘူး။ လက်ခံထားတဲ့ ကားတွေကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ရိုက်ချင်တယ်။ မျိုး အိုက်တင်တွေ ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါ။ အဆင်ပြေ မယ်လို့မျှော် လင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျရင် အရင်တုန်းက လုပ်ချင်ဇောနဲ့ လုပ် တာမျိုးလေးတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အရင် ကတည်းက ဘယ်မင်းသားရယ်လို့ ရွေးပြီး မရိုက်ခဲ့ဖူးဘူး။ များသောအားဖြင့် အသစ်တွေနဲ့ ရိုက်ရတာ များတယ်။ လိုအပ်ချက်ရှိရင် ဖြည့်စွက်ပြီး နားလည်ပေးပါ။ မျိုး ကားရိုက်တွေ နားလိုက်တာကို ကြိုက်တာ လည်းရှိသလို၊မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။ ကြိုက်တာတောင် နှစ်မျိုးပေါ့။ အစကတည်းက မျိုးကို မကြိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်မျိုးက ချစ်တဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး နားစေချင်တာမျိုး၊ ဇာတ်ကားတွေ ပြန်ရိုက်စေ ချင်တာ မျိုးတွေပေါ့။ အမျိုးမျိုးပါပဲ” လို့ပြောပြပါတယ်။ မျက်စိ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကားရိုက်တဲ့ သူတွေနဲ့ နားလည် မှုယူပြီး လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပြတဲ့ မယ်လိုဒီက “အခု မျက်လုံးကတော့ သေသေချာချာ စစ်ထား တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားရိုက်နေရင်းနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ဆေးခန်းပြန်ပြရမှာပေါ့။ ဒါကိုလည်း နားလည်မှု ယူထားပါတယ်။ မျက်စိက စွံပြီး ခြစ်ထုတ်ရမယ့် အခြေအနေဆိုရင်ပေါ့။ တော်ရုံေ လာက်ဆိုရင် တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မီးထိုးတာ တအားပြင်းလာတဲ့ အချိန်မျိုးတွေ တအားပူလာတဲ့ အချိန်တွေဆို မျက်စိထိမှာစိုးလို့ပါ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲတွင်သုံးမည့်ဓာတ်ပုံများ တရုတ်ပညာရှင်များလက်မခံ၍ ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေရ
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်း အနားများတွင်အသုံးပြုမည့် နောက်ခံဓာတ်ပုံများ တရုတ်ပညာ ရှင်များက လက်မခံသည့်အတွက် အသစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင်ပါဝင်မည့် အစီအစဉ်များဖြစ်သည့် စောင်း တော်သင်္ဂါ ဆိုင်းမင်္ဂလာ၊ အမျိုး သားအမွေအနှစ်မဟာပုဂံ၊ ပွဲဦး အလင်္ကာ၊ မြေဝိုင်းအက ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားအတွက် ရောင်စုံပန်း များ၏ မြစ်ကြေးမုံ၊ ကျောင်းသူ ကလေးများ၏ အေရိုးဗစ်အက၊ ပြန်ဆုံမယ် ညီညွတ်ခြင်း မှရှေ့သို့ ချီ၊ ဆင်ရတနာ၊ မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း၊ အနာဂတ်၏ကမ္ဘာမြေ စသည့်အ စီအစဉ်များတွင် ယင်းတို့နှင့် လိုက်ဖက်သည့်ဓာတ်ပုံများကို နောက်ခံ (LED Screen)ပေါ်တွင် ပြသ မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမြင့်ကြူက ''လက်ရှိမြန်မာ နိုင်ငံ ဓာတ်ပုံ အသင်းကတောင်းခံ ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေက (Resolution)မကိုက်ညီတဲ့အတွက် တရုတ် ကပညာ ရှင်တွေက လက်မခံဘူး။ ဒါကြောင့် ဝန်ကြီးဌာနက ကင်မရာအသစ်တွေဝယ်ယူပြီး အသစ်ထပ်မံရိုက် ကူးနေ ပါတယ်'' ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ထို့အပြင် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲအ ခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁ဝရက် ည ၆နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် လူ အင်အား ရှစ်ထောင်အသုံးပြု၍ တင်ဆက်မည်ဖြစ်ကာ အိုလံပစ် မီးရှူးတိုင်ကို မီးထွန်းညှိရန်အ တွက် ပုဂံခေတ်မြားပစ် အကျော် အမော်သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကာ မြားဖြင့်ပစ်၍ မီးထွန်းညှိပေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်း အနားများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကို ပြည်တွင်းကျပ်ငွေ ခုနစ်ဘီလီ ယံအသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ပွဲအ စီအစဉ် ၁၉ခုနှင့် ပိတ်ပွဲအစီအစဉ် ၁၆ခုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်တင်ဆက်မည့် အနုပညာရှင် များ၏ဝတ်စုံများကို ပြည်တွင်းရှိ ပိုးထည် ဆိုင်များမှ ပိုးထည်များ စပွန်ဆာပေးထားသည်။
ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြ ဓာတ်ပုံများရိုက်ခံပြီးနောက် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ဟု ချီးကျူးခံရသူ
Victoria's Secret မော်ဒယ်လ်တစ်ဦး၏ ဘဝကို မျှော်မှန်းသည့် ကန်ဒေါလ်ဂျန်နာ၏ အိပ်မက်များ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်လာရန် ပိုမိုနီးစပ်လာပြီဟု သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ရန် ရက်ပိုင်းမျှ လိုသေးသည့် တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်လေးသည် ကိုလံဘီယာ ရေကူးဝတ်စုံ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း Agua Bendita၏ 2014 Collectionအတွက် ကိုယ်ဟန်ပြ ဓာတ်ပုံများ အရိုက်ခံခဲ့ရာ Victoria's Secret၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျော်ညီကြောင်း ချီးကျူးမှုများ ခံခဲ့ရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့မှ အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်မည့် အမေရိကန်သူ အလှမယ်လေးသည် ဂရိနိုင်ငံတွင် အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အလုပ်ခွင်သို့ ပြန်ဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Agua Benditaသည် ကန်ဒေါလ်ကို အမှတ် တံဆိပ်၏ 2014 Collection ကိုယ်စားပြု မော်ဒယ်လ်အဖြစ် ရွေးချယ်ကြောင်း ဇူလိုင်လက ကြေညာ ခဲ့သည်။
ကန်ဒေါလ်အနေဖြင့် Victoria's Secret၏ အလှနတ်သမီးများ စာရင်းတွင် ပါဝင်လာဖွယ် ရှိနေကြောင်း သတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အဝတ်အထည် ဖက်ရှင် ကုမ္ပဏီကြီးက တိုက်ရိုက် မှတ်ချက်ပေးခြင်း မရှိချေ။ Victoria's Secretမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက "Victoria's Secretဟာ အရည်အသွေး ပြည့်ဝပြီး အလားအလာ ကောင်းမွန်တဲ့ မော်ဒယ်လ်တိုင်းအတွက် တံခါးဖွင့်ထားဆဲပါ"ဟုသာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကန်ဒေါလ်က သူမသည် မီရန်ဒါကားရ်၊ ကန်ဒိုက်စ်ဆွန်နီပိုဝဲလ်၊ အလက်ဇန္ဒရို အမ်ဘရိုစီယို၊ အေဒရီယန်လီမာတို့ကဲ့သို့ Victoria's Secret မော်ဒယ်လ်တစ်ဦး ဖြစ်လာရန် အလွန်မျှော်လင့်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ဖူးသည်။ E! Newsနှင့် အင်တာဗျူးတွင် သူမက "Victoria's Secretရဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက် ဆိုတာက ကျွန်မ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝပါ။ ကျွန်မ အမြဲတမ်း အိပ်မက်ခဲ့တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့တော့ လက်တွေ့ ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်ပါတယ်"ဟု ဖွင့်ဟပြောကြား ထားခဲ့သည်။
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အတွက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်လေလား???
ကျနော် သာဗြောတစ်ယောက် အိမ်မှာ ကော်ဖီတစ်ခွက် သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ ဇိမ်ယူနေခိုက် အာဘောတစ်ယောက် ကျနော့်အိမ်ကို ရောက်ချလာသည်။
အာဘော။ ဟေး သာဗြော. ဘာတွေလုပ်။ အံမယ် ကိုယ့်လူက ဇိမ်ကျနေပါလား။
သာဗြော။ အေး ဇိမ်ကြဆို ဒီနေ့ ကိုယ့်အားလပ်ရက်လေကွယ်။ ဆို ဘာကိစ္စ။
အာဘော။ ထူးထူးထွေထွေ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ အိမ်မှာ မဟေသီတစ်ယောက် ပူညံပူညံလုပ်နေတာနဲ့ နားမခံနိုင်တော့လို့ မင်းဆီထွက်လာတာ။
သာဗြော။ အေးကွာ... ငါတို့လည်း ဟိုတစ်ခေါက် လွှတ်တော်ကိစ္စပြောပြီးတည်းက မတွေ့တော့တာ။
အာဘော။ အေးကွ.. ဒီကြားထဲ သတင်းတွေကတော့ တော်တော်ဂယက်ရိုက်သွားတယ် ငါ့မောင်။
သာဗြော။ ဆိုပါအုံး အာဘောရ။
အာဘော။ မင်းလည်း သတင်းတွေဖတ်နေတာ သိမှာပါ။ ဟိုကွာ ၁၁ ဘီလီယံတို့။ လူတွေ အရူးလုပ်တာတို့။
သာဗြော။ အေးဟုတ်ပါ့ အာဘောရေ အဲကိစ္စတွေက တော့ တော်တော်ဂယက်ရိုက်ခဲ့တာပဲ။ နောက်ကျန် ပါသေးတယ်
တို့ သမ္မတကြီး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သွားတာ။ နောက် ဟိုအလှမယ်ကိစ္စလေး တော်တော်နာမည်ကြီးသွား တယ်ဟေး။
အာဘော။ ဘာလဲ ပြိုင်ကားစီးတဲ့ ကောင်မလေးလား။
သာဗြော။ ဟုတ်ပါ့ ကိုယ့်လူ အစုံပါပဲကွာ သတင်းစုံ အတင်းစုံနဲ့ တော်တော်ဂယက်ရိုက်သွားတာပါပဲ။
အာဘော။ ဟုတ်တယ် ကိုယ့်လူ ငါ့မလဲ သတင်းစာပေါင်းစုံ ၀ယ်ဖတ်လိုက်ရတာ လက်ဖက်ရည်ဖိုးတောင် မိန်းမကိုမနည်းတောင်းရတာ ဟ..ဟဟ။ ဒါနဲ့ ငါတစ်ခုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ကွ။ ဟို ၁၁ ကြီးက စရေးတဲ့ ၁၁ ဘီလီယံဆိုတာလေ။
သာဗြော။ အင်း အကောင့် ၅ ခုနဲ့ ၁၁ ဘီလီယံ တို့နိုင်ငံမှာ ရှိတယ်ဆိုပဲ။ အစိုးရ အဲလောက် ချမ်းသာမယ်လို့ ငါတော့ မထင်ပေါင်။
အာဘော။ အေး အဲတာကိုပဲပြောချင်တာ။ ၁၁ ကြီးက ဖွလိုက်တာ အဲကိစ္စ လွှတ်တော်မှာတောင် အစိုးရက လိုက်ရှင်းရတယ်ကိုယ့်လူရေ။ အစကတော့ ငါလည်း ၀မ်းသာနေတာ ဒီလောက်ပိုက်ဆံများတာ ငါတို့နိုင်ငံတယ်ဟုတ်ပါလား။ အကြွေးတွေလည်းဆပ်နိုင်တော့မယ်ပေါ့။ နောက်တော့မှ ရှင်းလင်းချက်တွေ ချေပချက်တွေ ထွက်လာတော့ တို့ ၁၁ ကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလို့။
သာဗြော။ အေး အာဘောရ ၁၁ ကြီးက ဖွတာဖြစ်စေ၊ အမှန်ဖော်ထုတ်တာဖြစ်စေ ဒီ ၁၁ ဘီလီယံနဲ့ ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တွဲတွေက ခုထိမဆုံးသေးဘူး ကိုယ့်လူ။ ဖတ်လိုက်ရသေးလား။ရန်ကုန်တိုင်းမ်သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါးရှင်
စည်သူအောင်မြင့် ပြန်ရေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ရှင်းတမ်းဆိုတာလေ။
အာဘော။ ဖတ်လိုက်ရပါ့ ငါ့မောင်။ ခု အဲဆောင်းပါးရှင် ကို ၁၁ ကြီး ကတရားပြန်စွဲလိုက်ပြီဆို။ သူ့ဆောင်းပါးက ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စေလို့ ဆိုလားပဲ။
သာဗြော။ ဟုတ်ပါ့။ ရန်ကုန်တိုင်းမ်သတင်းစာနှင့် ဆောင်းပါးရှင်ကို ၁၁ ကြီးက တရားစွဲမယ်လုပ်နေတာ။
အာဘော။ ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် ကိုယ့်လူ။ ၁၁ ကြီးက ၁၁ ဘီလီယံကိစ္စကို မမှန်ဘဲရေးတယ် ဆိုတာဟိုဆောင်းပါးရှင်က စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ပြန်ထောက်ပြထားတယ်လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား။
သာဗြော။ အေး ၁၁ ဘီလီယံ ကိစ္စကတော့ ၁၁ ကြီးက စလိုက်တာ တော်တော်ပွဲဆူသွားတာတော့ အမှန်ပဲ။
အစိုးရခမြာ ဖြေရှင်းချက်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးရ။ ရှင်းလင်းရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်မဟုတ်လား။ အစကတော့
တို့လို ငမွဲပြည်သူတွေလည်း ၁၁ ဘီလီယံကြီး ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ မစားရပေမယ့် အားကျနေကြတာမဟုတ်လား။
ခုလို အစိုးရကဖြေရှင်း။ ၁၁ ဘီလီယံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်ဆောင်းပါးတွေလည်း ထွက်လာတော့
ငါတို့ ခမြာ ဟင် ကနဲ သက်ပြင်းချယုံပဲတတ်နိုင်တာမဟုတ်လား။
အာဘော။ ဒါတော့ ဟုတ်တယ်ကိုယ့်လူရာ မီဒီယာဆိုတာလည်း အလုံးစုံမယုံရသေးဘူးဆိုတာ ငါတော့ တဖြည်းဖြည်း သိလာရပြီမောင်။
သာဗြော။ သူတို့အချင်းချင်း စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တွေ ဆော်ကြနှက်ကြနဲ့ ကြားထဲက ငါတို့ပြည်သူတွေက ဘယ်သူ့ အားကိုးလို့အားကိုးရမှန်းမသိတော့ပါဘူးကွာ။
အာဘော။ ခုလည်း ၁၁ ကြီးက တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ယာယီဖွဲ့ထားတဲ့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေတော့ ပြောရှာပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မီဒီယာအချင်းချင်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ပေါ့။
သာဗြော။ ပြောလည်းပြောချင်စရာပဲလေ ကိုယ့်လူရ။ ပြည်သူအားကိုးရတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဆိုပြီး တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့မတည့်ကြ ခြေထိုးကြ တရားစွဲကြနဲ့ လုပ်နေတော့ ငါတို့ ကြားက ပြည်သူတွေက ဘာကိုသွား ယုံရမလဲ။ အားကိုးရမလဲ။
အာဘော။ ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လည်း မဟန်ဘူးငါ့မောင်။ နောက်ထပ် ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ထပ်ပေါ်လာဖို့လိုနေမလားဘဲ။
သာဗြော။ ဘယ်လိုကိုယ့်လူ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ဟုတ်လား။ ရှင်းပါအုံး အထူးအဆန်းပါလား။
အာဘော။ ဆန်းတာမဟုတ်ဘူး ငါ့လူ။ လိုအပ်လာတာ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် က ဒီလို ပြည်သူတွေအတွက် အားမကိုးရတော့ဘဲ ထင်ရာစိုင်းနေခဲ့ရင်တော့ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ကလိုတယ်ငါ့လူ။
သာဗြော။ မင်းဆိုလိုတာ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ဆိုတာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လား။
အာဘော။ နိုးနိုး... ထိန်းချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ တည့်မတ်ပေးတာ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က ရေးချင်တာရေးပါ။
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီရေးမယ်ဆို ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ဆိုတာမလိုဘူး။ တကယ်လို့ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်နဲ့
မညီဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ဆိုတဲ့
ဆောင်းပါးရှင် စည်သူအောင်မြင့်တို့လို လူတွေ လိုတယ် ကိုယ့်လူ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က ဘာတွေမှားနေလဲ။
ဒီအမှားတွေကို ထောက်ပေးနိုင်ရမယ်။ တည့်မတ်ပေးနိုင်ရမယ်။ ထိန်းချုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တိုက်ခိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
သာဗြော။ ပေါက်ပြီ ကိုယ့်လူရေ ကိုယ့်လူပြောသလိုဆို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က အမှားရှိခဲ့ရင် သူ့ကို ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့ လူတစ်ဦးဦး ပညာရှင်တစ်ဦးဦးက ထောက်ပြဝေဖန်တည့်မတ်ပေးဖို့ ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်လား။
အာဘော။ ဒါပဲလေ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က သမာသမတ်ကျရင် ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် မလိုဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အမှန်ကို
ထောက်ပြပြောဆိုတည့်မတ်ပေးနိုင်တဲ့ သမာသမတ်ကျတဲ့ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်လူတွေလိုတယ်ငါ့မောင်။ ဒါဟာ တစ်ယောက်အမှားကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး တိုက်ခိုက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရားကိုရောက်အောင် တည့်မတ်ပေးတာ
ပဲဖြစ်တယ် ကိုယ့်လူ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် က ပြည်သူတွေ ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အထိ သမာသမတ်ကျနေရင်
ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ဆိုတာ ရှိကိုရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်လူရေ။
သာဗြော။ ဟ..ဟဟ နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ အာဘောရေ။ မင်းပြောမှပဲ မဏ္ဍိုင်လေးမျိုးကနေ နောက်တစ်မျိုးတိုးပြီးငါးမျိုးဖြစ်လာတော့တယ်။ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ကြီးရယ်။ ဒီကိစ္စဒီမှာပဲ ရပ်ရအောင်။ တော်ကြာဝေဖန်ရေးနဲ့ လေကန်ရေးလုပ်လို့ တို့ပါ
ကြားထဲက တရားစွဲခံရအုံးမယ် အာဘောရေ။
အာဘော။ ဟ..ဟ.. ဟုတ်ပါပြီ ကိုရင်သာဗြောရေ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်တွေထပ်ပဲ တိုးလာမလား။
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရဲ့ သမာသမတ်ကျ ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည် အားကိုးမှုကြောင့် ပျောက်ပဲပျောက်သွားမလား ဆိုတာကတော့...
သာဗြော။ ပိတ်ကားပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်ယုံပေါ့ ကိုရင်အာဘောရယ်။ ဟ ....ဟဟ ...ဟ။
ကန်တော့ပွဲပြီးချိန်မှ သာရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံစာပို့ထားကြောင်း အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦး လူမင်းပြောကြား
၉၃ နှစ်ပြည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နေ့နဲ့နှစ် ၅ဝ ပြည့် ရုပ်ရှင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကို အောက် တိုဘာ ၁၃ မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လောက သားတစ် ယောက် အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်နေ့က အထိမ်းအမှတ်နေ့ဆိုတာ မမေ့ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး၊ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းသင့် တဲ့ နေ့ထူးနေ့ မြတ် ပါလို့ ပြောပြ လာတဲ့မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းက..
” နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့လည်း အထိမ်းအမှတ်နေ့အနေနဲ့၊ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေကို အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးရတာမျိုးလေ။ ကိုယ်တို့ ရုပ်ရှင်လောက သားေ တွနဲ့ပတ်သက်ရင် ရုပ်ရှင် နေ့ဆိုတာ အမှတ် တရအထိမ်း အမှတ်နေ့တစ်နေ့လို ရှိကို ရှိနေရမယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေ ကို ဒီနေ့မှာ ရှုတင်နားဖို့တော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ နေ့ လယ်ကန် တော့ပွဲ ချိန်ပြီးမှသာ ရိုက်ကူးပါ ရန်လို့ မေတ္တာရပ်ခံ စာလေးတွေ ပို့ထားတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလို ရုပ်ရှင်နေ့ဆိုတာ ရုပ်ရှင် လောကသားတွေ အတွက်ဆို တာ ကို ဖြစ်သင့်တာ၊ ကိုယ်တိုင် လည်း အရင်ကတည်းက အကယ် ဒမီပွဲတို့၊ ရုပ်ရှင်ကန်တော့ပွဲ တို့ကို နှစ်စဉ်မပျက်မကွက် တက်ပါတယ်။ အဲဒီရက်မှာ ကိုယ်မသိလိုက်တဲ့ လူကြီးတွေ လည်းပါတယ်လေ။ ရုပ်ရှင် လောကဆိုတာ ရှေးခေတ် အဆက် ဆက်က ပညာရှင်တွေ လက် ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ အခုချိန်ထိ အသက်ဝင်နေတာလေ။ အာစရိ ယဂုေ ဏာအနန္တောဆိုတာ ရှိကို ရှိရမှာ။လူကြီးတွေကို ကန်တော့ ရတာလည်း ဝမ်းသာရတယ်။ မမီလိုက်၊ မကြားလိုက်ရတဲ့ ဆင်ခြင်သင့်စရာ အတုယူစရာ တွေကလည်း မှတ် သားသင့် စရာတွေပဲလေ။ အခုအလှူရှင် တွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက် မလာရောက်နိုင်တဲ့ သက်ကြီး တွေကိုလည်း ကိုယ်စား ကန် တော့ ခံပ စ္စည်းတွေပေးမှာပါ” လို့ လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ဘောလုံးကန်ကာ အလှူပြုခဲ့ ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ပီတိစကား
မြန်မာ့လက်ရွှေးစင်ဟောင်း ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အနုပညာ ရှင်များ ပါဝင်ထားတဲ့ ဘောလုံး အသင်းတို့က ချစ်ကြည်ရေး ရန်ပုံငွေဘောလုံးပွဲအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် နေ့ ညနေ၄နာရီက အောင်ဆန်း ဘောလုံးအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပရာ ဘောလုံးပွဲမစခင် အနုပညာရှင် အချို့က နေ့ခင်း ၁နာရီကနေ စပြီးတေးသီချင်း များ နဲ့ ဖျော်ြေ ဖ တင်ဆက်ခဲ့ပါ တယ်။ အခုလို ချစ်ကြည်ရေးပွဲ ကစားခဲ့တာဟာ ၂၇ကြိမ် မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် လှုံ့ဆော်ဂုဏ်ပြု တဲ့ အပြင် အောက် တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့ မှာကျရောက်မယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကြီးမှာ သက်ကြီးအနုပညာရှင်များကို ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ ပွဲအတွက်လည်း ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ အနေနဲ့ ကစားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ပုံငွေဘောလုံး ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် မိုးယံဇွန်က” အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကတည်းက သရုပ်ေ ဆာင် လော ကထဲကို ရောက်ကတည်း က အလှူတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ခု မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ့် သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ အတွက် ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပွဲလုပ်ပြီးတော့ ပါဝင် ခွင့်ရ တဲ့အတွက် ဝမ်းလည်း ဝမ်းသာတယ်။ပျော်လည်း ပျော်တယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင်လည်း ဝါသနာပါတဲ့ အားကစားတစ်ခုနဲ့ ကူဖြစ်ခဲ့ရ တဲ့အတွက် ပီ တိဖြစ်ရ ပါတယ်။ ဒီနှစ် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုလည်း စည်စည်ကားကား ဖြစ်စေချင် ပါတယ်။
အနုပညာလောက ထဲက ရုပ်ရှင်လောကသားတစ် ယောက်အနေနဲ့ သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲကို ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာ နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝါ သနာပါတဲ့ အားကစားကနေရန်ပုံငွေပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီလောကမှာရှိတဲ့ အလွှာပေါင်း စုံက သူတွေအားလုံး တစ်စု တစ်ဝေးနဲ့ စည်စည်ကားကား လေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကောင်းခန့်ရဲ့ ပီတိစကားကို လည်း မေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရာ ကောင်းခန့်က” ခုလို ကျင်းပတဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင်ပြီးတော့ ရလာတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်နေ့ပွဲ တော်ကြီးမှာ သက်ကြီးတွေ ကို ပူဇော်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါ တယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါက လည်း ကာယအလှူပဲပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအောက် တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့မှာ ကျ ရောက်မယ့် ရုပ်ရှင် သက် ကြီး ပူဇော်ပွဲကြီးကို အကောင်းဆုံး နဲ့ အစည်ကားဆုံး ဖြစ်စေ ချင်ပါတယ်။သက်ကြီးတွေ အတွက် ဒီလို ပွဲလေးလုပ်ပေးတယ်။ အခုနှစ်ဆိုရင်လည်း သက်ကြီး ပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပိုများ လာတယ်။သူတို့အတွက် ဖြစ်စေ ချင်တဲ့ ဆန္ဒကတော့ အများကြီးပါပဲ” လို့ ပီတိစကားပြောပြခဲ့ပါ တယ်။ ဒီ့နောက် ဘောလုံးအား ကစားကို ဝါသနာပါသူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုဇာနည်ကလည်း” အစ် ကိုတို့ရဲ့ ကာယလုပ်အားနဲ့ လုပ် ပေးခဲ့တဲ့ အထဲကနေ ခုလို သက်ကြီးပူဇော် ပွဲအတွက် လှူဒါန်း မယ်ဆိုတာ သိရတော့ ပီတိဖြစ် ရပါတယ်။မွန်လည်း မွန်မြတ် တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ခုလို သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကိုတစ်နှစ် ထက်တစ်နှစ် ပိုပိုပြီးတော့ စည်စည် ကားကား ဖြစ်စေရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော် ။၁၂ရက်နေ့မှာ ကစားမယ့် ပွဲကလည်း ရန်ပုံငွေ ပွဲလေးပါပဲ။ နိုင်တာ၊ ရှုံးတာထက် အားလုံးက ကာယလုပ်အားနဲ့ လုပ်ကြတာ ပါ။ဒီအတွက်လည်း ပီတိဖြစ်ရ ပါတယ်” လို့ ရန်ပုံငွေပွဲကြီး ကန် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အင်္ဂလန်တိုက်ရိုက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲပိုလန်ကို နိုင်မှရမည်
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
၀င်ဘလေကွင်းတွင် ကစားမည့်ပွဲစဉ်အား ပိုလန်ပရိသတ် (၁၈၀၀၀)ထိ လာရောက်အားပေးမည် ဖြစ်သည့်အတွက်ပိုလန်အသင်း စိတ်ဓာတ်ပိုင်း တက်ကြွနေလိမ့်မည်ဟု အင်္ဂလန်နည်းပြ ရွိုင်းဟော့ဒ်ဆန်က သုံးသပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးခြေစစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်အနေဖြင့် ပိုလန်ကို အနိုင်ရပါမှ တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းပွဲစဉ်အတွက် ပိုလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က လက်မှတ် (၈၀၀၀)သာ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ပိုလန် ပရိသတ် များအား လက်မှတ်(၁၈၀၀၀) ခွဲတမ်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် ဟော့ဒ်ဆန်က “ပရိသတ်မပါဘဲ ကစားရတာထက် ပရိသတ်(၁၈၀၀၀)ရှေ့မှာ ကစားရတာကို ပိုလန်အသင်း ပိုကြိုက်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ ပိုလန်တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အတွက် အက်ဖ်အေကသာ အခုလို လက်မှတ်ခွဲတမ်းမချဘူးဆိုရင် လုံခြုံရေးပြဿနာတွေ ပိုရှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၆၀၀၀၀နဲ့ ၂၀၀၀၀ဆိုတဲ့ အချိုးက ကျွန်တော်တို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ သူတို့အသင်းကိုလည်း ကျွန်တော် မကြောက်ပါဘူး”ဟု ပြောခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဟော့ဒ်ဆန်က မိမိတို့အနေဖြင့် ပရိသတ်အင်အား တောင့်တင်းသည့်အသင်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေ ကြဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ သို့သော် ဟော့ဒ်ဆန်မှာ ပိုလန်နှင့် ကစားမည့်ပွဲစဉ်အတွက် ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကစားသမားများကိုလည်း ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်းအား အသိပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
နှလုံးရောဂါရှင်များ သီချင်းများများနားထောင်ပါက အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဥရောပ နှလုံးရောဂါ အဖွဲ့အစည်း ညီလာခံ (၂၀၁၃)တွင် တင်ပြခဲ့သော လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုအရ နှလုံး ရောဂါခံစား နေရသော လူနာများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့နှစ်သက်သည့် တေးဂီတ သံများကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာ ရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင် ကြောင်း သိရှိရသည်။ နှလုံးရောဂါ လူနာ ၇၄ ဦးကို အုပ်စု ၃ စုခွဲကာ ပထမအုပ်စုကို ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ၃ ပတ်ကြာလုပ်စေခဲ့ပြီး ဒုတိယအုပ်စု ကို ၎င်းတို့နှစ်သက်သည့် တေးဂီတ သံများအား နားထောင်စေခဲ့သည်။ တတိယ အုပ်စုကိုမူ ကာယလေ့ကျင့် ခန်းရော ၎င်းတို့နှစ် သက်သည့် တေး ဂီတ နားထောင်ခြင်းကိုပါ နှစ်ခုစလုံး လုပ်ခိုင်းခဲ့သည်။
တတိယ အုပ်စုသည် နှလုံးစွမ်း ဆောင်ရည်များ သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ကို တွေ့ရှိ ရပြီး ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ် နိုင်စွမ်းရည် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ပထမ အုပ်စုတွင် ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်နိုင် စွမ်းရည် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့ပြီး တေး ဂီတသက်သက် နားထောင်နိုင် သူတို့မှာ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း သာလျှင် တိုးတက် ခဲ့သည်။
တေးဂီတ နားဆင်သော အခါ ဦးနှောက် အတွင်းမှ အင်ဒိုဖင်းဟုခေါ် သော ဟော်မုန်းများ ထွက်လာပြီး သွေးကြော ကျန်းမာရေး ကောင်းစေသည်ဟု ဆိုသည်။ အကောင်းဆုံး ဂီတ အမျိုးအစား ဟူ၍ သတ်မှတ် ချက်မရှိဘဲ ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေသော ဂီတကိုနားဆင် သင့်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ​အဓိကပါတီနှစ်ခုကြား ​သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် ​အစိုးရအသုံးစရိတ် ဆိုင်ရာ ​အငြင်းပွားမှုဖြစ်နေပြီး ​ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အသုံးစရိတ်တွေ ​မသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့ ပြဿနာဟာ ​မကြာခင်မှာ ​ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ ​ပြောဆိုသံတွေ ​ထွက်ပေါ်လာပေမယ့် ​အမေရိကန် သမ္မတ ကတော့ ​တကယ် တိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာကို ​စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားက ​ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ​တိုးတက်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့် တကယ် တိုးတက်မှု ရှိမရှိဆိုတာကို ​စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် ​ဘတ်ဂျက် ​ဥပဒေပြဿနာကြောင့် ​အစိုးရဌာနတချို့ ​ပိတ်ချထားရပြီး ​သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ​အစိုးရအမှု ထမ်းတွေ ​အလုပ်လက်မဲ့ ​ဖြစ်နေရပါတယ်။
ဒီလိုပြဿနာကြောင့် ​အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေအပေါ် ​ဆန့်ကျင်တဲ့ ​ဆန္ဒပြမှုတွေလည်း ​ဖြစ်ပေါ်နေ ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ​ဖြစ်နေတဲ့ ​ပြဿနာကြောင့် ​အမေရိကန်​ဒေါ်လာ ​ဈေးနှုန်းတွေ ​တဖြေးဖြေးကျဆင်းမယ့် အနေအထားရှိနေပြီး ​သြစတြေးလျဒေါ်လာဈေးနှုန်း ​မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ ​ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ခုအချိန်မှာ ​သြစတြေးလျဒေါ်လာဈေးနှုန်း ​မြင့်တက်နေပြီး ​အမေရိကန်နိုင်ငံက ​ပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ရင် ​ဒိထက်မက ​မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ ​စီးပွားရေးသုံးသပ်သူတွေက ​ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ထိပ်တန်းနေရာမှာ အမျိုးသမီး နည်းပါးမှုအပေါ်လေဘာဝေဖန်ခံရ
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ​အဓိက ​အတိုက်အခံပါတီအတွင်း ​ပြီးခဲ့တဲ့ ​ရက်ပိုင်းကပဲ ​ခေါင်းဆောင်သစ် ​ရွေးချယ် တင်မြောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ ​ပါတီအတွင်း ​ထိပ်တန်းနေရာတွေမှာ ​အမျိုးသမီး ​ပါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက် ​ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပါတယ်။
လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ ​Bill ​Shorten ​က ​အမျိုးသမီးတွေကို ​အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ ​သူတို့ ပါတီအတွင်း ​ရှေ့တန်းကဦးဆောင်ရမဲ့ ​အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ​အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ​၁၁ဦး ​ပါဝင်ထည့်သွင်း ထားတယ်လို့ ​ဆိုပေမယ့် ​လေဘာပါတီအမတ်ဖြစ်တဲ့ ​Anna ​Burke ​ကတော့ ​ရှေ့တန်းမှာ ​တာဝန်ယူ တဲ့နေရာတွေမှာ ​အမျိုးသားတွေပဲ ​များနေတယ်လို့ ​ဝေဖန်ထားပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ​လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်သစ် ​Bill ​Shorten ​ဟာ ​သူ့ရဲ့လက်ထက်အတွင်း ​ကာပွန် အခွန်ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ​ပိုမိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ​လက်ရှိအာဏာရအစိုးရဖက်ကတော့ ​အရင် ​လေဘာပါတီအစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ ​ကာပွန် အခွန်ကောက်ခံမှုကို ​ပယ်ဖျက်ဖို့ ​ကြိုးစားနေပြီး ​လာမယ့် ​ဇွန်လိုင်လ ​လွှတ်တော်အပြောင်းအလဲကို ​စောင့်မနေတော့ပဲ ​အလျှင်စလို ​အကောင်အထည်ဖော် ​ဆောင်ရွက်သွားချင်တယ်လို့ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံ ​၀န်ကြီးချုပ် ​Tony ​Abbott ​ကပြောပါတယ်။
အမေရိကန် သုတေသီ ၃ဦး စီးပွားရေး နိုဘယ်လ်ဆု ရရှိ
ဒီနှစ် ​၂၀၁၃ ​ခုနှစ် ​အတွက် ​စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ​နိုဘယ်လ်ဆုကို ​အမေရိကန်နိုင်ငံက ​စီးပွားရေး ​သုတေ သီတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ​Lars ​Peter ​Hansen, ​Eugene ​Fama ​နဲ့ ​Robert ​Shiller ​သုံးဦးတို့က ​ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့သုံးဦးကို ​စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ​ဈေးကွက်တွင်းကပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတွေကို ​ကြိုတင်လေ့လာ ​ခန့်မှန်း နိုင်တဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေ ​ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ​စီးပွားရေးနိုဘယ်လ်ဆု ​ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေး ​သုတေသီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ​Lars ​Peter ​Hansen ​နဲ့ ​Eugene ​Fama ​တို့ဟာ ​Chicago ​တက္ကသိုလ်က ဖြစ်ကြပြီး ​ကတော့ ​Yale ​တက္ကသိုလ်က ​စီးပွားရေးသုတွေသီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီးပွားရေး ​နိုဘယ်လ်ဆုဟာ ​ဆီဒင်နိုင်ငံသား ​သိပ္ပံပညာရှင်လည်းဖြစ် ​ပရဟိတအလှူရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ ​Alfred ​Nobel ​ရဲ့ ​နှစ်ကိုယ်မူလ ​သေတမ်းစာမှာရေးထားခဲ့တဲ့ ​နိုဘယ်လ်ဆုပေးရမယ့် ​စာရင်းထဲမှာ ​မပါဝင်ပဲ ​၁၉၆၈ခုနှစ်ကမှစပြီးတော့ ​ဆွီဒင်နိုင်ငံ ​ဗဟိုဘဏ်ရဲ့နှစ်သုံးရာဖြည့် ​ကို ​ကျင်းပတဲ့အနေနဲ့ ​၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ စပြီးတော့ ​စီးပွားရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို ​စတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားနိုဘယ်လ်ဆုတွေကိုတော့ ​၁၉၀၁ခုနှစ်ကတည်းက ​ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှာ ဖိုင်လင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘိုကလေးမြို့က ကျားပိုက်ရေလုပ်သား၂၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဖိုင်လင်းမုန်တိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် လေပြင်မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘိုကလေးမြို့နဲ့ ဖျာပုံမြို့နယ်တွေက ကျားပိုက်ထောင်တဲ့ ရေလုပ်သာတွေ ပျောက်ဆုံနေကြောင်း ဘိုကလေးမြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကျားပိုက်ဖောင်ရင်းတွေ အတိအကျမရှိတဲ့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရတဲ့အတွက် အသေအပျောက်များခဲ့ကြောင်း ဘိုကလေးဒေသခံ ဦးအောင်ကိုလတ်က ပြောပါတယ်။
“ဖောင်တွေကို လျော့ပြီး စရင်းတင်ထားတယ်။ ငါးလုပ်ငန်းရယ်၊ ကျားပိုက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရယ်၊ အလုပ်မား မှတ်ပုံတင် ဦးစီးဌာနရယ် သုံးခုပေါင်းပြီး အဲဒါကို ရိုက်ထားတဲ့အတွက် ဒီဖောင်တွေ ပျက်ပြီဆိုချိန်မှာ သူတို့ လူစာရင်းလည်း မရှိဘူး။ ကယ်ဆယ်ရေးအစီစဉ်ကတော့ သူတို့အစီစဉ်နဲ့ သူတို့ လိုက်ကြနေကြတယ်။”
မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာက သတိပေးတားမြစ်ခဲ့သော်လည်း အချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက လိုက်နာမှုမရှိလို့ အခုလို အသေအပျောက်တွေရှိခဲ့ရတယ်လို့ ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
ဖောင်တွေပျက်တဲ့ သတင်းကြားနေရပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင် မနုနုထွေးက ပြောပါတယ်။
“ဖောင်တွေ ပျက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဖောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ မပါဘူးလို့ပြောတယ်။ ဆက်သွယ်ခွင့်လည်း မပေးဘူး။ စကားပြောခွင့်လည်း မပေးဘူး။ သမီးတို့က သူတို့ စကားပြောခွင့်လည်း မပေးဘူးဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဆက်သွယ် လိုချင်တယ်။ လူကတော့ ၃၀၊ ၄၀ လောက်ရှိမယ် လိုက်သွားတာ၊ တယောက်မှ ဆက်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပိုင်ရှင်ကို ဖုန်းဆက်တော့ အော်တောင်လွှတ်သေးတယ်။”
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ကလေမြို့နယ်ရှိ မင်းရာဇာရေစင် ကျားပိုက်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တာဝန်ရှိသူက အခုလိုပြောပါတယ်။
“လူတွေကတော့ ဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူး။ ရာသီဥတုက လေတိုက်တော့ အလုပ်သမားတွေကို ပင်လယ်အ၀ ပြန်ခေါ်လာတယ်။ ခေါ်လာတော့ ဆင်းပြေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပင်လယ်မှာ ထောင်နေရင်းနဲ့ ပစ်ထားခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပစ်ထားခဲ့တဲ့ ပိုက်တွေ၊ ဖောင်တွေကတော့ ဆုံးရှုံးမှု ရှိတာပေါ့။”
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းတို့ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၁ သိန်းခွဲလောက် သေဆုံးခဲ့ရသလို ၂၀၁၀ ခု အောက်တိုဘာလ၂၂ ရက်က ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဂီရိမုန်တိုင်းကြောင့်လည်း လူ ၁၅၀ လောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိတွင် နျူကလီးယား ဒုံးကျည် ထိပ်ဖူး ၁၇,၀၀၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခန့်က ရှိခဲ့သည့် အရေအတွက်အောက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စတော့ဟုမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသန အင်စတီကျူက ထုတ်ပြန်သည်။ လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏ ဆိုင်းငံ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက နျူကလီးယားလက်နက် ကင်းမဲ့သော ကမ္ဘာဖြစ်ရန် လိုကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သဖြင့် လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် တွန်းအားသစ်များ ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုး စစ်မဟာမိတ် အဖွဲ့က ဒုံးခွင်းဒုံး စနစ်များ တည်ဆောက် နေခြင်းကြောင့် သမ္မတအိုဘားမား၏ မျှော်မှန်းချက်များ အကောင်အထည် ပေါ်လာရေး မှန်ဝါးလျက် ရှိသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံက နျူကလီးယား လက်နက် အရေအတွက်ကို သုံးပုံတစ်ပုံ လျှော့ချသွားရန် ရုရှားနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း အမေရိကန် လုပ်ဆောင် နေသည့် ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်မှာ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ရုရှားတာဝေးပစ် ဒုံးကျည်များကို ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်က တားဆီးနိုင်ခြင်းကြောင့် ရုရှားနိုင်ငံ အနေနှင့် မိမိ၏ နျူကလီးယား ထိပ်ဖူး အရည်အတွက်ကို တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် မဟာဗျူဟာ ဟန့်တားရေး မူဝါဒကို အဆုံးရှုံးခံရန် နည်းလမ်းနှစ်ခုသာ ကျန်တော့ကြောင်း ဝေဖန်လိုက်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေမှုများကြောင့် နျူကလီးယား ကင်းမဲ့ကမ္ဘာ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ဘဲ နျူကလီးယား လက်နက်များ အမြဲတမ်း တပ်ဆင်ထားသည့် ကမ္ဘာအဖြစ်သာ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး အကြီးတန်းအရာရှိ အန်ဂလာကိတ်က ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်း နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံ အရေအတွက် ၂၅ နိုင်ငံသို့ တိုးမြင့် လာနိုင်ပြီး ယင်းနိုင်ငံများတွင် အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ အစ္စရေးနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တို့ ပါဝင်ကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့ နျူကလီးယားလက်နက် စုစုပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အမေရိကန်နှင့် ရုရှားနှစ်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့က လက်နက် အရေအတွက် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ ထိ ပိုင်ဆိုင် ထားကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယား လက်နက် ၁၁၀၊ ပါကစ္စတန်တွင် ၁၂၀ နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် အခု ၈၀ ထိ ရှိနေကြောင်း အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင် အဖွဲ့က ပြောကြားသည်။
အတင့်ရဲလာသူဗုံးပေါက်မှုများကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပြီး လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းမှုနဲ့ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီ
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များ၊ မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးများဆက်တိုက် တွေ့ရှိနေရမှုကြောင့် တရားခံကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိရန် လျို့ဝှက်စုံစမ်း ထောက်လှမ်းသည့် အပိုင်းကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်မှုနှင့် စစ်ဆေးရှာဖွေ မှုများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး တို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များကို ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၌ အောက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖြူးမြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေးရုံးရှေ့၊ ရန်ကုန် - မန္တလေး လမ်းကြောင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၄၂/၆တွင် လိုက်ထရပ် ခရီးသည် ယာဉ်ပေါ်မှ ပလတ်စတစ် အိတ်အတွင်း ထည့်ထားသည့် လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် ညပိုင်းတွင် တောင်ငူမြို့ ၁၇ ရပ်ကွက်၊ သံလမ်းရှိ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဗုံးတွေ့ရှိမှုနှင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း အဝေးပြေးဝင်းရှေ့ ကားမှတ်တိုင်၌ ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနီးအနားတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် အခြားဗုံး တစ်လုံးကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ် ၃/မာန်ပြေရပ်ကွက်၊ ယမုံနာလမ်း၊ အခွန် လွတ်ဈေးရှေ့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်း အနီးရှိ သစ်လုံးတင်ကား နောက်တွဲအောက်တွင် အမည်းရောင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖြင့် ထည့်ထားသည့် အထုပ်အား ဒေါပုံမြို့နယ် သင်္ဘောကျင်း ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် ထက်အောင်နိုင်(၁၄)နှစ်နှင့် ၀င်းမင်းထွေး(၁၄)နှစ်တို့ နှစ်ဦးမှ ကောက်ယူ၍ အိတ်အတွင်း ပါရှိသော အနီရောင် စားပွဲတင်နာရီ၏ လက်တံအား လှည့်ကြည့်စဉ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဗုံးနှင့် ပေါက်ကွဲမှု မရှိသေးဘဲ တွေ့ရှိရသည့် ဗုံးတို့မှာ အမျိုးအစားတူဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲအောင် ပြုလုပ်နေသူများမှာ အဖွဲ့တစ်ခုတည်းကသာ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး စစ်ဌာနချုပ်မှ အမည်မဖော်လိုသူ ဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးကလည်း The Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး မြင့်အေးက ''လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုက ခါတိုင်းထက် အချိန်ပိုင်းရော လူအင်အားပါ တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ တရားခံကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက် လျို့ဝှက်စုံစမ်း ထောက်လှမ်းမှုတွေကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေတယ်။ ဒါတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့အပြင် အခြားအဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ မကောင်းအောင် ကြံဖန်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့သူတွေက အများအကျိုးကို ဖျက်ဆီးစေချင်လို့ ဒီလိုမျိုး လက်လုပ်ဗုံးတွေကို လုပ်ပြီးတော့ လိုက်ချနေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မသင်္ကာတာတွေ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာကို အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်'' ဟု အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် လုံခြုံရေး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ ဒုတိယရဲမှူးကြီး မင်းအောင်က ''တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အရတော့ တပ်ရော၊ ရဲရော လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားပြီးတော့ ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း၌ ပြေးဆွဲနေသော မီးရထား လမ်းပိုင်းများ၊ ဘူတာရပ်ဝန်းများနှင့် မီးရထားအတွင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း မီးရထား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးဝင်းမောင်ထံမှ သိရသည်။
ထို့အပြင် ''ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ အင်အားအရ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုတော့ မလွှမ်းခြုံနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ အများဆုံး လာရောက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ လုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင် သတင်းတွေ ချပြတယ်။ သတိပေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်'' ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည် စောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ယာယီတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားအောင် ပြုလုပ်နေမှုမှာ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခနှင့် နိုင်ငံအတွင်း အရင်ကထက် တိုးတက်နေမှုကို မလိုလားသူများက အကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ၀င်းထွန်းက သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ရဲမှူးကြီး ၀င်းထွန်းက ''ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေက အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပွားအောင် လုပ်တာကလည်း အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဓိကကတော့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ဆက်နွှယ်မှုကြောင့်လည်း ယူဆရသလို တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်နေမှုကို မလိုလားတဲ့ သူတွေက လုပ်တယ်လို့လဲ ယူဆရတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းမှာ တခြားနိုင်ငံတွေက ဆက်စပ် ၀င်ရောက်လာနိုင်တဲ့ မြို့ဝင်မြို့ထွက် ဂိတ်တွေအပြင် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း တွေကိုလည်း လုံခြုံရေးအထူး တိုးမြှင့်ထားတယ်။ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ ဧည့်စာရင်းမတိုင်ဘဲ နေတဲ့သူတွေ၊ မျက်နှာ စိမ်းတွေ၊ သွားလာရင်းနဲ့ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ သူတွေကို တွေ့ရင်တော့ အနီးဆုံး ရဲစခန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေကို သတိပေးတဲ့ အခါမှာလည်း ထိတ်လန့်မှု မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်'' ဟု အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။
အလားတူ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ကြည်လင်းက အောက်တိုဘာ ၁၄ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ''လက်ရှိရဲစခန်းတွေနဲ့ ရဲကင်းတွေမှာ လုံခြုံရေးအင်အားကို တိုးမြှင့်ထားတဲ့အပြင် နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ ၃၁ လုံးကိုလည်း လုံခြုံရေး ချထားတယ်။ မြို့နယ် အကုန်လုံးမှာ သေချာတဲ့ စနစ်နဲ့ ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေလည်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ မသင်္ကာ တာတွေ့ရင် အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားဖို့ ပြောထားတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေက နိုင်ငံရေးဘက်မှာ အရမ်းကို အစွန်းရောက်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ ယူဆရတယ်'' ဟု ရဲမှူးကြီး ကြည်လင်းက သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သွားလာနေသော ယာဉ်များကို ပိတ်ဆို့ရှာဖွေ စစ်ဆေးများ ပြုလုပ်လာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အငှားယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ကိုဘိုတင့်က ''တစ်ခုခုဖြစ်မှ၊ တစ်ခုခု သတင်းရမှ ထပြီးတော့ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေး နေတာတွေ ပြုလုပ်တာက မကောင်းဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံရေးကို သတိထားပြီးတော့ အမြဲတမ်း စစ်ဆေးနေဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုဟာက စစ်ချင်တဲ့ အချိန်စစ်တယ်။ ပြီးရင် ဆက်မလုပ်တော့ဘူး'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အလုံမြို့နယ်ရှိ WESTERN PARK RUBY စားသောက်ဆိုင်အတွင်း မပေါက်ကွဲသေးသည့် ချိန်ကိုက်ဗုံး တစ်လုံးကိုလည်း ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကွန်ဒုံးသုံးကြပါဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်အမှာစကား(မိန်းကလေးများအထူးဖတ်သင့်သည်)
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under ပညာရေးဆောင်းပါး | No comments
သဘာဝမှာ ဟိုစပ်စပ် သည်စပ်စပ်နှင့် လူရာဝင်တတ်သော၊ စကားကြွယ်သော၊ ဖော်ရွေသောေ ယာက်ျားသူငါများကို ခံတွင်းတွေ့ တတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရောတ၀င် ကြည်ဖြူတတ်ကြပါသည်။ ထိုအခါ ယောက်ျားများအကြိုက်ကို တစ်ခါတစ်ရံ အလိုက်ပေး ပေါင်းသင်း တတ်ကြရာက မှားသင့်သည်များ မှားယွင်း သွားတတ်ကြပါသည်။ အခွင့်အရေးသည် နေရာတကာ မပေးကောင်းပေ။
အခွင့်အရေး ယူတတ်သူများနှင့် ကြုံလျှင်သာ ဆိုးတတ်ပါသည်။
ဖြစ်ရပ်ကလေးတစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း လက်လုပ်လက်စား မိန်းမ တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ ရင်ဖွင့် ပြောပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုက္ခသည်များ ကို စောင့်ရှောက်ရင်း သူတို့ ရင်ဖွင့် စကားများ ရေးသော စာတိုကလေးများကို စုဆောင်း၍ Japan International Cooperation Agency မှ ဓမ္မဒါနအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆို ပေးထားပါသည်။
ကျွန်မမှာ ခုလဆို ဖောက်သည်ချခွင့်ရတဲ့အတွက် (စာအုပ်စီစဉ်သူများကို) အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ရပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မဟာကုရာနတ္တိ ရောဂါ အေ့ဒ်(စ်) ကြောင့် ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းမှုတွေ ဘ၀မှာ ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်မအသက် (၂၃) နှစ်ပါ။ ကျွန်မမှာညီမငယ် တစ်ယောက်နဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ မောင် တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ညီမကတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ။ကျွန်မက မောင်လေးကို ပြုစုရင်း ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသူပါ။ မိဘတွေကတော့ကျွန်မ အသက် နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်မှာ ဆုံးပါးကုန်ကြပါပြီ။
ကျွန်မ ဗန်ကောက်မြို့ကြီးပေါ်မှာအိမ်ဖော် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ အိမ်မှာပဲ ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ ကိုးလပဲ အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်မ အလုပ်က ထွက်လိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်မရဲ့ အိမ်ကြီးရှင် အမျိုးသားရဲ့အမူအရာတွေကို မကြိုက်လို့ပါ။ သူ့အပြုအမူတွေက ထူးခြားပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မမလုံလဲဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ တခြားအိမ်တစ်အိမ်မှာ ကလေးထ်ိန်းအဖြစ် ပြောင်းလုပ်ပါတယ်။ တစ်လဘတ် (၃၀၀၀) ရတော့ အိမ်ကိုလည်း ပြန်ပို့ နိုင်တာပေါ့လေ။
ကျွန်မတို့ အိမ်နားမှာဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ရှိပါသည်။ ကျွန်မဟာ ညနေတိုင်းဆိုရင် အိမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့အတူ လမ်းလျှောက် ထွက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံတော့ တာပါပဲ။ သူက ပန်းရံ အလုပ်သမား ဆိုပါတော့။ ရင်းနှီး ခင်မင် သွားကြတော့လည်း သူ့ရဲ့ အပြောအဆို သူ့ရဲ့ လူရည်လည်မှုတွေ အပေါ် သဘောကျမိတာ ၀န်ခံပါတယ်။
တစ်နေ့ အလုပ်အားလပ်ရက် ရတာနဲ့ (သူလည်း အလုပ်အားတာမို့) ကျွန်မတို့ အလည်ခရီး ထွက်ဖြစ် သွားကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ မဆင်မခြင်မှုကြောင့် ပါပဲလေ။ ကျွန်မဟာ သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက် သွားမိပါတယ်။ သူ့ကို ယုံမိတာကိုး။ သူက လည်လည်ဝယ်ဝယ် ရှိတယ် မဟုတ်လား။
ဒီတော့လည်း အကာအကွယ်တွေ ဘာတွေ မယူခဲ့မိဘူးပေါ့။ ဒီနောက်ပိုင်း ကျတော့လည်း ကျွန်မဟာ
သူ့ကို ရှောင်နေမိ ပြန်ပါတယ်။ သူကလည်း ကျွန်မနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး ရှောင်နေလေ့ ရှိပါရဲ့။
သူ့မှာက ကျွန်မကို လှည့်ဖျားစရာတွေ အများသားလေ။ ကျွန်မကလည်း တော်တော်ရူးရူးမိုက်မိုက် လုပ်ခဲ့မိတာကိုး။ ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန် နှစ်လ ရပြီဆိုတော့မှ နေရပ်ပြန်ပြေး ရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်မဟာ သူ့ကို အရမ်း မုန်းနေပါပြီ။ သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် ကိုပါပဲရှင်။
သူနဲ့ ဆုံပါသေးတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ဟာ သူနဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဇွတ်ငြင်း နေတော့တာပါပဲ။
ကိုယ်ဝန် ကိုးလရတော့ ကျွန်မ ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကျွန်မကို ပြောတယ်။ ကျွန်မရဲ့ သွေးစစ်ချက်မှာ ပြဿနာ ရှိနေတယ်တဲ့။
ပြီးတော့ သားသမီး ရလာရင်လည်း ကလေးကို မိခင်နို့ မတိုက်ရဘူးတဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကျွန်မမှာ ....ကျွန်မမှာလေ... အေအိုင်ဒီအက်(စ်) ရောဂါ စွဲကပ်နေလို့ ပါပဲတဲ့ရှင်။
ကျွန်မကမ္ဘာလေး ပျက်စီးသွားပါပြီ။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ကုန်ပါပြီ။
တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု တွေသာ အထပ်ထပ် ရစ်ပတ်နေပါတော့တယ်။
ဒီဘ၀ ရောက်မှတော့ ကျွန်မအနေနဲ့မိန်းမသားတွေ အပေါ်မှာ ကျေးဇူးပြုနိုင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
“ ကျွန်မလို စိတ်အလို မလိုက်မိ ကြပါစေနဲ့”
“ ကျွန်မလို မစူးစမ်း မဆင်ခြင်မိ ကြပါစေနဲ့”
“အို ယောက်ျားတွေရဲ့ စကားတွေ၊သူတို့ရဲ့ .... လူရည်လည်မှုတွေကို အထင်မကြီး မိကြပါစေနဲ့”
ကွန်ဒုံးသုံးကြပါ။ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေဟာ ရိုးသားတယ်။ ယုံလွယ်တယ် ဆိုတော့ ကွန်ဒုံးသုံးလေ့ မရှိကြဘူးမဟုတ်လား။
By သုမောင်- ကျေးဇူးပဲAIDS
ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးမည်
စာရေးဆရာ မောင်သိန်းဆိုင်၏ နာမည်ကြီး အနုပညာ လက်ရာဖြစ်သော ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး ဝတ္ထုကို နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် များစွာဖြင့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ရိုက်ကူးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဇာတ်လမ်း တွဲကို ရိုက်ကူးမည့် ဒါရိုက်တာ အဏ်ထော်ဏီက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“ဒီဝတ္ထုက ဆရာမောင်သိန်းဆိုင် မဆုံးခင် ကတည်းက ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဝယ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆို ဇာတ်လမ်းကို ချုံ့ပစ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှမြောတာနဲ့ သိမ်းထားခဲ့တာ။ အခု Sky Net က ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ ဇာတ်ကို ပြကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ကလည်း သဘောကျတာနဲ့ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ ၃ လပိုင်းမှာ စရိုက်မယ်” ဟု ယင်းရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးဖြစ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး ဝတ္ထုမှာ စာရေးဆရာ မောင်သိန်းဆိုင်၏ နာမည်ကြီး ဝတ္ထုဖြစ်သည့်အတွက် ရိုက်ကူး ရသည်မှာ တာဝန်ကြီးသလို၊ မိမိအတွက် ပထမဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ရင်ခုန်နေကြောင်း၊ ပရိသတ်များ အတွက် အကောင်းဆုံး တင်ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် အဓိကဇာတ်ဆောင် ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီးအဖြစ် စိုးမြတ်သူဇာ၊ ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး၏ ငယ်ဘဝ ဇာတ်ကောင် နေရာတွင် စိုးပြည့်သဇင်၊ ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး၏ ခင်ပွန်း မောင်မောင်ဦးအဖြစ် ရန်အောင်၊ ခင်ခင်ကြီး၏ ဖခင်အဖြစ် နေအောင်၊ မောင်မောင်ဦး၏ ဖခင်အဖြစ် ဇင်ဝိုင်းတို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒါရိုက်တာ အဏ်ထော်ဏီက ဆိုသည်။
“မကြီးက ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီးရဲ့ အသက်၄၀ ကျော်အရွယ်ကို သရုပ်ဆောင်ရမယ်။ ငယ်ဘဝကိုတော့ တခြား တစ်ယောက်က သရုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်။ ကိုရီးယားကားတွေ၊ ကုလားကားတွေ ကြားထဲမှာ မြန်မာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဝင်တိုးဖို့ တော်တော်လေးတော့ ကြိုးစားရမယ် ထင်တယ်” ဟု အဓိကဇာတ်ဆောင် ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီးအဖြစ် ပါဝင်မည့် သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာက ပြောကြားသည်။
NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာများဖြင့် ပေါ်ပေါ်တင် တိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့သူ မိုးသီးဇွန် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလောကထဲ ပါတီထောင်ပြီး ပြန်ဝင်လာတော့မည်ဟုဆို
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ပြန်လည်ရရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ထူထောင်သွားရန်ရှိကြောင်း ၈၈ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဦးမိုးသီးဇွန်က မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းနှင့် သီးသန့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ပြန်ထူထောင်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး process (လုပ်ငန်းစဉ်) ထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီထံသို့စာရေးတင်ထားပြီး မှတ်ပုံတင်ပြန်ချပေးပါက ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်သွားမည်ဟု ဦးမိုးသီးဇွန် ကပြောသည်။
“လူ့ဘောင်သစ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်တခြားနိုင်ငံရေးအင်အားပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးမိုးသီးဇွန်သည် ၈၈ အရေးအခင်းတွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ တွင် လူ့ဘောင်သစ်ပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးချိန်တွင် တောခိုကာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) တွင်လက်နက်ကိုင်ကာ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့သည်။
၎င်းကာလများအတွင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစားများဖြင့် ပေါ်ပေါ်တင် တိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သည့် Traders Hotel ရှေ့မှာ လုံခြုံရေးကင်းစောင့်နေကြသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ရစဉ်။ (အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃)
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဗုံးလန့်တာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ မနေ့ည ၁၁နာရီခွဲကတော့ ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်က Trader’s Hotel မှာ အသေးစားပေါက်ကွဲမှု တခု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပေါက်ကွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာခဲ့ပြီး၊ အနီးတ၀ိုက် လုံခြုံရေးကို အထူးတင်းကြပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး နာရီပိုင်းမှာပဲ Trader Hotel ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့၊ တာဝန်ကျ ဟိုတယ်မန်နေဂျာက အခြေအနေတွေကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မယ် မျှော်လင့်တယ်လို့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
မေး။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး အထိအခိုက် ရှိတယ်လို့ ကြားရလို့ပါ။
“တစ်ယောက်တည်းလို့တော့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်တော့ confirm မလုပ်နိုင်သေး ဘူးခင်ဗျ။ investitation တော့ လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ် ငါးဆယ်မှာ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့ trace လိုက်ဖို့ ကတော့ အရမ်း အချိန်က စောသေးတဲ့အခါကျတော့ ပေါက်ကွဲမှုတော့ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ သတင်းကိုထုတ်ဖို့ အခုလောလောဆယ်က comfirm မလုပ်နိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။”
ဒဏ်ရာရရှိသူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့ အေပီသတင်းမှာတော့ ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးအရာရှိတဦး ပြောတာကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုလိုက် အဲဒီအခန်းမှာ တည်းခိုစဉ်ပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီး၊ စိုးရိမ်ရတဲ့ ဒဏ်ရာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မယ့်သူတွေကို လိုက်လံ စုံစမ်းနေပြီလို့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒုရဲအုပ်ဟန်ဝင်းစိုးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ကိုးလွှာပေါ့နော်။ ထရိတ်ဒါးကိုးလွှာက အခန်း (၉၂၁) မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။ လောလော ဆယ်တော့ ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ BE တပ်ကနေ စစ်ပြီးတော့မှ အတည်ပြုနေတယ်။ အခုလောလောဆယ် အတည်ပြုနေတာ လက်ရှိ တည်းနေတဲ့သူမတိုင်ခင်မှာ ဒီအခန်းကို ဒီဟိုတယ် ကနေပြီး သန့်ရှင်းရေးပေါ့နော်။ မတည်းခင်အချိန်မှာ ဝင်ထွက်နေတဲ့ ဝန်ထမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဧည့်သည်တွေကို စီစီတီဗွီကနေပြီး မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ကြည့်ရှုနေပါတယ်။”
ရန်ကုန်မှာ ဒီမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ဗုံးတွေ့တာတွေ ဗုံးပေါက်ကွဲတာတွေဖြစ်ခဲ့သလို၊ လုံခြုံရေး ပိုင်းကလည်း သတိပေး သတိထားနေကြတဲ့ကြားက အခုလို နာမည်ကျော်ဟိုတယ်တလုံးအတွင်းမှာပဲ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာကြောင့် ရန်ကုန်ဒေသခံတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတော့ ဖြစ်နေတယ်လို့ အလွတ်သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦးက ပြောပါတယ်။
မနေ့က မန္တလေးမြို့မှာလည်း လက်လုပ်ဗုံးတလုံး တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တနေ့ကကလည်း သာကေတမြို့နယ်အတွင်းက အမှိုက်ပုံတခုမှာ ဗုံးကွဲတာကြောင့် ကလေးငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သလို ဒီမတိုင်ခင်ရက်တွေကလည်း ရန်ကုန်စော်ဘွားကြီးကုန်း ကားဂိတ်မှာ ဗုံးကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု လတ်တလော တွေ့ရတဲ့ ဗုံးတွေဟာ အသေးစား လက်လုပ်ဗုံးတွေဖြစ်ကြတာမို့ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ထိခိုက်မှုတွေတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု ရက်ပိုင်း ပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ ဗုံးတွေ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ လက်ချက်ဆိုတာကိုတော့ လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေဘက်က တစုံတရာ ရှင်းလင်းပြော ဆိုတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုက ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under မုဒိမ်းမှု | No comments
နေအိမ်တွင် မွေးနေ့ပွဲပြုလုပ်မည်ဟုဆိုကာ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အဘိုးအိုက အသက် (၇)နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူ အသက် (၇)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက် နံနက် ၇နာ ရီတွင် အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ပြီး ခင်မင်နေသူ အသက် (၆၈) နှစ်အရွယ် ဦးမောင်မောင် စိန်က မွေးနေ့ပြုလုပ်မည်ဟုပြောဆိုကာ မိခင်ထံမှ ၎င်း၏နေအိမ်သို့ တစ်နေကုန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။
ကလေးငယ်ခေါ်သွားပြီး နေအိမ်မီးဖိုချောင်အတွင်း သားမယားပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြ ထားသည်။ ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ပြီးနောက် ၎င်းက ည ၁၀ နာရီတွင် နေအိမ်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
““တရားခံကို ရမန်ယူထားပြီး ချုပ်ထားတုန်းပဲရှိသေးတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မသိရသေးဘူး။ အရင် ကတည်းက အိမ်နီးချင်းဆိုတော့ ခင်တော့ အ၀င်အထွက်ရှိတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဲဒီ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိပါ ဘူး””ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ကလေးမိခင်က ကလေးငယ်အားအဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် ဦးမောင်မောင်စိန်ကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၃၇၆အရ မုဒိမ်းမှုဖြင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထား၍ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Traders ဟိုတယ် ဗုံးကွဲ၊ နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦင်္း ဒဏ်ရာရ
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ည ၁၁ နာရီ ခွဲ ၀န်းကျင်အချိန်လောက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း Traders ဟိုတယ်မှာ တနင်္လာနေ့ည က ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ တည်းခိုနေတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောဆိုရာမှာ- Traders ဟိုတယ် ကိုးလွှာ၊ အခန်းနံပါတ် ၉၂၁ ရဲ့ ရေချိုးခန်း အတွင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲတာလို့ယူဆကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ အချက် အလက်တွေ တွေ့အောင်ရှာဖွေရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းကဖေါ်ပြပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိနေတဲ့ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ရဲ့ ပေါင်၊ လက် နဲ့ ကျော ဘက်တွေမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ် ဌာနကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ မစိုးရိမ်ရ ကြောင်း ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရသူ အမျိုးသမီး၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နဲ့ ကလေးနှစ်ဦးဟာ ဟောင်ကောင် ကနေ ရောက်ရှိလာခဲ့ တာဖြစ်ပြီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နေ့လည်ပိုင်းက စတင်တည်းခိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တပ်မတော် အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း ဗုံးရှင်းလင်းရေး တပ်ဖွဲ့က Traders တစ်ဝိုက်မှာ အနံ့ခံခွေးတွေနဲ့ အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းအထိ ဆက်လက် ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲပစ္စည်းတစုံတရာ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး Traders ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုသူ ဧည့်သည်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ဟိုတယ် အ၀င်အထွက် မှတ်တမ်းတွေ ကို CCTV ကင်မရာက တစ်ဆင့် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 15, 2013, under မှုခင်း | 1 comment
စစ်ကိုင်းမြို့ ရွှေပြည့်စုံ ဟိုတယ် စားသောက်ခန်းမ မှာ ယနေ့နံနက် ၃နာရီခွဲ၊ ဆွမ်းဦးပုညရှင် မုဒ်ဦးစောင်းတန်းမှာ နံနက် ၅နာရီ ၄၅ မိနစ်တို့မှာ ဗုံးအသီးသီးပေါက်ကွဲ ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိဘူးလို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်နိုင်က ပြောပါတယ်။
စစ်ကိုင်းမြို့သည် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံအများအပြားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သံဃာအများဆုံး သီတင်းသုံးရာ မြို့ဖြစ်ကာ ယခုကဲ့သို့ ဘုရားစောင်းတန်းမှာ ဗုံးကွဲခြင်းသည် အခြားမြို့မှ အခြားဘာသာဝင် တစ်ဦးက လာရောက် ဗုံးခွဲတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိနေပါတယ်။
ဟော်လန်၏ ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်အဖြစ် ဗန်ပါစီ ရပ်တည်
ဟော်လန်တိုက်စစ်မှူး ဗန်ပါစီမှာ ဟန်ဂေရီကို (၈-၁)ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည့်ပွဲစဉ်တွင် ဟက်ထရစ်
သွင်းယူနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ကလွိုက်ဗက်၏ ဂိုးသွင်းအများဆုံး စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဗန်ပါစီမှာ အဆိုပါပွဲစဉ်မတိုင်မီ ဟော်လန်အသင်းအတွက် စုစုပေါင်း(၃၈)ဂိုး သွင်းယူပေးထားခဲ့ပြီး ဟန်ဂေရီ ဘက်သို့ ဟက်ထရစ် သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် (၄၁)ဂိုးဖြင့် ကလွိုက်ဗက်၏ ဂိုး(၄၀)စံချိန်ကိုကျော်တက်နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ဗန်ပါစီက ဟန်ဂေရီနှင့်ပွဲတွင် ကလွိုက်ဗက်၏စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ် မထားကြောင်း ၀န်ခံသွားခဲ့သည်။ “ ခြေချောင်းဒဏ်ရာ သက်သာလာတာ မကြာသေးတဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ တစ်နာရီလောက် ကစားဖို့ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲချိန်(၅)မိနစ်အတွင်းမှာ ဘောလုံးနှစ်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော် မပျော်မရွင် ဖြစ်ခဲ့မိပြီး နောက်(၅)မိနစ်လောက် ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်သင်းလုံး ခြေစွမ်းပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုပွဲမှာ ကလွိုက် ဗက်ရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ ကျွန်တော် မထင်ထားခဲ့ပါဘူး”ဟု ဗန်ပါစီက ပြောခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးထားခဲ့သည့် M67 ဗုံးအား သက်ဆိုင်ရာမှအချိန်မီရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့
အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက် နေ့လည် (၁)နာရီခန့်တွင် မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၊ ၁၆လမ်းနှင့် လမ်း(၈၀)ထောင့်ရှိ ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်အနီး၌ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် ဗုန်းအား စားပွဲတင်နာရီနှင့် AA ဓါတ်ခဲတို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ ချထားခဲ့၍ မန္တလေးမြို့ရှိ စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်က ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ဗုံးကို ရွှေဘဲစားတော်စက်သို့ လာရောက် စားသောက်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှဆိုင်အတွင်းတွင် ချန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းဆိုင်မှဝန်ထမ်းကအိတ်ကျန်ခဲ့သည်ထင်၍ လိုက်ပေးသည်ကို ပြန်မယူပဲ အဆိုပါ အမျိုးသမီးက လမ်းထောင့်တွင်ချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
“ရွှေဘဲမှာလာစားတဲ့အမျိုးသမီးက စားသောက်ပြီးပြန်ထွက်တော့ကလေးတွေကအိတ်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး လိုက်ပေးတယ် ၊ ပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်မယူပဲနဲ့ လမ်းထောင့်မှာချသွားတော့ မသင်္ကာလို့ဖွင့်ကြည့်ရာကနေ ဗုံးကိုစတွေ့တာပဲ ” ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ရောက်ရှိနေသည့်ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
အဆိုပါဗုံးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် M67ဗုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင် သည်ကိုမူ မသိရှိသေးကြောင်းအဆင့်မြင့်အရာရှိများက ပြောကြားသည်။
ဗုံးအား စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက Water Cannon (အရည်တစ်မျိုးဖြင့်ဗုံးအား အသက်မဲ့စေသောစနစ်) စနစ်အား အသုံးပြုပြီး ညနေ(၃) နာရီတွင် ရှင်းလင်းခဲ့သောကြောင့် ထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း (၁၄)ရက်နေ့၌ အလုံမြို့နယ်၊ Waster Park II စားသောက်အတွင်းမှ ချိန်ကိုက်ဗုံး
ဟု ယူဆရသော အထုပ်တစ်ထုပ်အားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ(၁၃)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်းလက်လုံးဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ဦးထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
မြို့ကြီးအချို့တွင် ဗုံးကွဲမှုနှင့် ဗုံးတွေ့ရှိမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်
မန္တလေးမြို့ လမ်း ၈၀ နဲ့ ၁၆ လမ်းထောင့်မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၂ နာရီကျော်က ဗုံးတလုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေ စနစ်တံဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မရနိုင်တော့တာကြောင့် ၃ နာရီလောက်မှာ ဖောက်ခွဲရှင်းလင်းလိုက်ကြတယ်လို့ မန္တတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက ပြောပါတယ်။
ဗုံးဟာ ဓာတ်ခဲ ၃ ခဲနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်လုပ်ဗုံး တလုံး ဖြစ်ပြီး ဗုံးရှင်းလင်းရေးတပ်က တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညနေ ၄ နာရီ ခွဲ ၀န်းကျင်လောက်ကလည်း မန္တလေးမြို့ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား ၆၂ လမ်း၊ ချမ်းအေး သာဇံမြို့နယ်ရှိ ဝေပုလ္လာရာမကျောင်း မတ္တရာတိုက်အပေါက်ဝမှာ ကလေးကျောပိုးအိတ် အပြာရောင်တလုံး မသင်္ကာဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လုံခြုံရေးယူကာ အဲဒီ အထုတ်ကို ကာရံ ထားတယ်လို့လည်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ တရက်တည်းမှာတင် ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ်က western park စားသောက် ဆိုင်မှာလည်း မနက် ၁၀ နာရီလောက်က ဗုံးတလုံး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သာကေတမြို့နယ် ၃ မာန်ပြေရပ်ကွက် မာန်ပြေလမ်းနဲ့ မြင်တော်သာလမ်းအကြား၊ ယမုံနာမြို့ပတ် လမ်းမကြီးပေါ် အခွန်လွတ်ဈေးရှေ့မှာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက အသေးစားပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပြီး ကလေးငယ် ၂ ဦး ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရသွားပါတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး မြို့တွေမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ဗုံးတွေ တွေ့ရှိတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့လည်း စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်နေရပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ပြည်သူတွေ ဗုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရင် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားဖို့ အသိပေး နိုးဆော်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း လုံခြုံရေးကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ တတိယ အကြိမ်အဖြစ် ၁၅ ရက်ကြာ သွားရောက်မည်
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်ထိ ဥရောပသို့ ၁၅ ရက်ကြာ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုခရီးစဉ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် ဥရောပ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ခရီးစဉ် အတွင်း ဘယ်လဂျီယံ၊ လူဇင်ဘတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်နှင့် အီတလီ စသည့် နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် မည်ဖြစ်ကာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဥရောပ ပါလီမန်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ "Sandhurst" စစ်တက္ကသိုလ်တွင် အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ မြောက်အိုင်ယာလန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် Sakharov လူ့အခွင့်အရေးဆုကို လက်ခံရယူရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ရန်နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေးအတွက် အစဉ်တစ်စိုက် အားပေး ထောက်ခံခဲ့သော အီတလီ နိုင်ငံရှိ မြို့လေးမြို့သို့ သွားရောက်ရန်လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အတူ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ငံလင်း၊ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာတင်မာအောင်နှင့် ဦးစိုးဝင်းတို့ လိုက်ပါသွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခု ခရီးစဉ်အတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော ၎င်း၏သားနှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံရန်အစီအစဉ် ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ နေပြည်တော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး တာဝန်ရှိသူ ဦးဇေယျာသော်က မသိရှိရသေးကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥရောပသို့ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် နော်ဝေ၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အိုင်ယာလန် နိုင်ငံများသို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန် ၁၃ ရက်မှ ၁၉ ရက်ထိ သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်ထိ ပိုလန်၊ ဟန်ဂေရီနှင့် ချက်သမ္မတ နိုင်ငံများသို့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ် အပါအ၀င် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုဗယ်ဆုရှင် များနှင့် တွေ့ဆုံကာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန်မြို့ Traders ဟိုတယ် ကိုးလွှာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံသူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် Traders ဟိုတယ် အခန်းအမှတ် (၉၂၁) အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်ဇော်ထွန်း)
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် အခန်းအမှတ် (၉၂၁)၏ ပြတင်းတံခါး အပိုင်းအစ
ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာမှ Traders ဟိုတယ် အနီးဝန်းကျင်တွင် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်စဉ်
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် Traders ဟိုတယ်ရှေ့တွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ကျသူများကို တွေ့ရစဉ်
လက်ရှိတွင် တရားခံ ဖမ်းဆီးရမိရေး အတွက် Traders ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုသူ ဧည့်သည်များ၏ အချက်အလက်များနှင့် ဟိုတယ် အ၀င်အထွက် မှတ်တမ်းများကို CCTV ကင်မရာမှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးနှစ်လုံး တစ်နေ့တည်းတွေ့ရှိ
WESTERN PARK RUBY စားသောက်ဆိုင်အတွင်း ချိန်ကိုက်ဗုံး တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် စားပွဲအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မင်းသိန်းနိုင်)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးနှစ်လုံး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် ညပိုင်းက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့ရှိ ဧည့်ရိပ်သာ တစ်ခုတွင် ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့် သာကေတ မြို့နယ်တို့တွင်လည်း ၁၈ နာရီအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များအပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များ၌ တစ်နေ့တည်း မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးနှစ်လုံးအား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် အလုံမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ စောရန်ပိုင် အနောက်ရပ်ကွက်ရှိ WESTERN PARK RUBY စားသောက်ဆိုင် အတွင်းရှိ စားပွဲခုံနံပါတ် (၁၉) အောက်တွင် စားပွဲထိုး တာဝန်ကျ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေသော ကျော်ဇေယျာမင်း (၁၈) နှစ်မှ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အမည်းရောင်ဖြင့် အထုပ်တစ်ထုပ်အား တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဆိုင်တာဝန် ရှိသူများအား ပြောပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဆိုင်တာဝန် ရှိသူများက အဆိုပါ အမည်းရောင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထုပ်အား ဆိုင်၏ အနောက်ဘက်သို့ ယူဆောင်ပြီး ဖွင့်ကြည့်စဉ် ၀ိုင်ယာကြိုးနှစ်ကြိုး၊ ခလုတ်နှစ်ခုနှင့် ဒိုင်ခွက်ပါ အရာတစ်ခုအား တွေ့ရှိရာ ဓာတ်ပုံရိုက်၍ အလုံမြို့မ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ပြသ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး အပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူများ အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ယင်းအထုပ်အား စစ်ဆေးကြည့်ရာ ဗုံး (သို့မဟုတ်) ချိန်ကိုက်ဗုံးဟု ယူဆရသော အလျားလေးလက်မ၊ အနံနှစ်လက်မ၊ အ၀ါရောင်နှင့် အဖြူရောင် ၀ိုင်ယာကြိုး ဆက်သွယ်ထားသော ဒိုင်ခွက်ပါ အရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
''အဲဒီဆိုင်မှာ CCTV တပ်ဆင်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီအရာက ချိန်ကိုက်ဗုံးလို့ ယူဆရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကို အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် အဲဒီအရာကို ကားတာယာ သုံးကွင်းနဲ့ ထပ်စွပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လူတွေကို အဲဒီနေရာနဲ့ အဝေးကို ရွှေ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ ကားအစီး ၂၀ လောက်ကို ရွှေ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ တိုင်းခရိုင် တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ပြီးတော့ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုတော့ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပဲ တာဝန်ယူ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်'' ဟု အလုံမြို့မ ရဲစခန်းက စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဝင်းနိုင်က အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြောသည်။
ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့် ကုန်တိုက်ရှေ့တွင် ဗုံးဟုသံသယရှိခြင်း ခံရသည့် လက်ကမ်းကြော်ငြာ စက္ကူထုပ်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မင်းသိန်းနိုင်)
ထို့နောက် တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိလာပြီး မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်တွင် အမှတ် (၉၀၅) စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ထပ်မံရောက်ရှိလာကာ ဗုံး (သို့မဟုတ်) ချိန်ကိုက်ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာများကို ထပ်မံ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ''မိုင်း'' ဟု အတည်ပြုခဲ့ကာ ထပ်မံစစ်ဆေးရန်အတွက် ယူဆောင် သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဗုံးတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းစားသောက်ဆိုင်မှ လက်ထောက် အထွေထွေ မန်နေဂျာ ကိုဝင်းဗိုလ်က ''မနေ့က ညပိုင်းမှာ အဲဒီစားပွဲဝိုင်းမှာ မိသားစု သုံးယောက်တစ်ဖွဲ့ အရင်ထိုင်တယ်။ အဲဒီမိသားစုက တစ်နာရီခွဲ ၀န်းကျင်လောက်ကြာအောင် စားသောက်ပြီး ပြန်သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီစားပွဲဝိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လာစားတဲ့ လူသုံးယောက်က အကုန်လုံး အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ပဲ ရှိတယ်။ ဘာစားသောက် ဖွယ်ရာမှ မမှာဘဲ ဘီယာနှစ်လုံး မှာပြီးတော့ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ စားသောက်ပြီး ပြန်သွားကြတယ်။ ဘာမှ မှာမစားတဲ့အတွက် အဲဒီစားပွဲဝိုင်းကိုထပ်ပြီး သန့်ရှင်းရေး မလုပ်လိုက်မိပါဘူး။ မနက် ခုံအောက်ပိုင်းတွေ ကြမ်းပြင်တွေကို သန့်ရှင်းတွေလုပ်တဲ့ စားပွဲထိုး ကောင်လေးက တွေ့တာပါ'' ဟု ပြောကြားသည်။
အလားတူ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာ စံမြို့နယ်၊ ကျုံးအနောက်ဘက် လမ်း ၈၀၊ ၁၆ လမ်းထောင့်ရှိ ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်က အမေရိကန်နိုင်ငံလုပ် M 67 အမျိုးအစား ဗုံးတစ်လုံး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လက်ပစ်ဗုံးအား အေအေဓာတ်ခဲ ခြောက်လုံးနှင့် စားပွဲတင်နာရီတွဲကာ ချိန်ကိုက်ဗုံးအဖြစ် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဆိုင်ဝန်ထမ်းမှ တွေ့ရှိရာ ၁၆ လမ်း ၊ ၈၀ နှင့် ၈၁ လမ်းကြားတွင် ပြောင်းရွှေ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ဖောက်ခွဲရေးတပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများမှ မိုင်းရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဗုံးမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါက အန္တရာယ် များသောကြောင့် ကားတာယာနှင့် သဲအိတ်များ ကာရံ၍ ညနေ ၃ နာရီတွင် ဖောက်ခွဲပစ်ခဲ့ရသည်။
ယင်းနောက် ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင် အတွင်း ဆက်လက် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗုံးရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ''ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင် ခုံနံပါတ် ၁၄ မှာ ထိုင်စားသွားတဲ့ ဧည့်သည်နှစ်ဦးက ခုံအောက်မှာ ထားသွားတာကို ၀ိတ်တာက တွေ့တာ။ စီစီတီဗွီမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံလုပ် လက်ပစ်ဗုံးပါ'' ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့ ဗုံးတွေ့ရှိမှုကြောင့် ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်အတွင်း ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၆၂ လမ်း၊ ၂၉-၃၀ လမ်းကြားရှိ ဝေပုလ္လာရာမ ကျောင်းတိုက်ရှေ့တွင်လည်း ဗုံးဟုယူဆရသော မသင်္ကာဖွယ် ကျောပိုးအိတ်ကို လာရောက် ပစ်သွားကြောင်း စည်ပင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ သတင်းပေးရာ အဆိုပါ နေရာ၌လည်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ နှစ်နာရီကျော်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းအထုပ်တွင်း၌ အ၀တ်စများနှင့် ဂျာနယ် စက္ကူများသာ ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
ထရိတ်ဒါး ဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံ...
မြန်မာလူမှုအဖွဲ့များ ဖွံ့ဖြိုးရေး Standard Chartere...
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်တာ ၀င်ရှာရမှ ကျောက်အရိုင်း...
အနုပညာသမား ရဲ့ ဘဝကို ပရိသတ်က ပိုင်တာပါ ဆိုတဲ့ ဒါရိ...
၂နှစ်ကြာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှု နားထားရာက ပြန်လည်ပြီး ဇ...
ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြ ဓာတ်ပုံများရိုက်ခံပြီးနေ...
ကန်တော့ပွဲပြီးချိန်မှ သာရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်ရန် ...
ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ဘောလုံးကန်ကာ အလှူပြု...
နှလုံးရောဂါရှင်များ သီချင်းများများနားထောင်ပါက အကျ...
ကွန်ဒုံးသုံးကြပါဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့...
NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ...
Traders ဟော်တယ်ခန်းတွင်းပေါက်ကွဲမှု အမေရိကန်အမျိုး...
အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုက ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအ...
အမျိုးသမီးတစ်ဦးထားခဲ့သည့် M67 ဗုံးအား သက်ဆိုင်ရာမှ...
မြို့ကြီးအချို့တွင် ဗုံးကွဲမှုနှင့် ဗုံးတွေ့ရှိမှုမျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ တတိယ အကြိ...
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန်မြို့ T...
“ကိုရီးယားမှာ ကြော်ငြာ သွားရိုက်မယ့် ခင်လပြည့်ဇော်...